Ywar Thar Lay (YTU): 6/1/08
အဲဒီစကားကို အဖွားရှိတုန်းက ခဏခဏကြားနေရတယ်။ သူငယ်ပြန် ချိန်ရောက်ပင်မယ့် သူတည်ခဲ့တဲ့ ဘုရားကို အမြဲမပြတ်ပြင်ချင်စိတ်ဖြစ်နေတာကိုက သူ.ရဲ့ကုသိုလ်စိတ်ပေါ့။
အဲဒီမြစ်ကမ်းဘေးကရွာလေးမယ် ဒို့များမွေးခဲ့တာပေါ့။ ဘွားမယ်တူတဲ့ တို.အမေ့နာမယ်က။ တစ်ဦးတည်းသောသမီး။ ကမ်းဘေးက လယ်ကွင်းတောက်လျှောက်ဟာ ဖွားတို.ပိုင်တဲ့လယ်တွေပဲလေ။ ခုတော့လား လယ်လုပ်သူလယ်ပိုင်စေဖြစ်လိုက်ဆိုတော့ သူရင်းငှားတွေလက်ထဲရောက်ရပြီပေါ့။ ဒီလယ်တွေပိုင်ဖို. မျိုးစဉ်ဘောင်ဆက်ကြိုးစားခဲ့တာပေါ့။ ဘာတွေလုပ်ခဲ့ဘူးလို.လဲ စာရင်းနဲ့အင်းနဲ့တော်ရေ မမယ်ရင်တို.က။ စောင်လည်းရက်တက်တာပဲ၊ ရက်ကန်းဆိုတာ မြို.ပေါ်ရောက်တဲ့ထိ ရက်တုန်းတော်။ အမွေသိမ်းထားတဲ့စောင်လေးထုတ်လိုက်ပါအုံး နွေးဆိုမှနွေး။ မြန်မာမုန်.အမျိုး မျိုး လုပ်သမှသိပ်လုပ်တတ်။ အိမ်မှာ ရှိတဲ့မုန့်ဘန်းတွေကိုက မုန်.ဆိုင်ဖွင့်လို့ရရဲ့။ ရွာကိုက မုန့်ရောင်းတဲ့ရွာမဟုတ်လား သုံးထပ်သင်္ဘောတွေများလာရင် အို.....ုကိုယ့်ခတ်တတ်ကိုခတ်ပြီးလှေငယ်လေးကိုလှော်ပြီး မကြောက်မရွံ့ အတင်းကပ်။ အတင်းရောင်း။ မြေပဲပေါ်ချိန် နှုတ်ဖို.မနက်စောစောထ ဒွေးလေးတို.လှည်းပေါ် အခန်.သားပေါ့တော်။ အကြမ်းအိုးလေး ပုဆိုးစုတ်လေး ခေါင်းပေါ်တင်ပြီး ရွက်သွားလိုက်တာများအကျ။ နေကြာပန်းများ ခူးရုံဘယ်ကမလဲ နေကြာစေ့ကို တုတ်နဲ့ ကို ရိုက်ပြီးတပြည်ဘယ်လောက်ပေးမလဲ ပိုပေးတဲ့ဆီ ဖင်မြဲရုံပဲပေါ့။ အမလေး နေကြာတွေကိုင်လို.ယားလားလို့မမေးနဲ့တော်ရေ. ရိုက်ပြီးလို.ကတော့ သောင်ပြင်အပြေးပဲ။ မြစ်ထဲခုန်ဆင်း ထမီကို ဘူဘောင်းလုပ်လှိုင်းစီးပြီးမှ အိမ်ပြန်ရုံပဲ။
ကိုညွန်.နဲ့တွေ.ကြတာလား။ သူကအထက်ကတော်ရေ.အထက်က။ သူကလည်းတစ်ဦးတည်းသောသား။ တွေ့မယ့်တွေ့တော့လဲ အဲလို။ နှစ်ဘက်လုံးက သဘောမတူဘူးလေ။ ခိုးရာလိုက်ပြေးတာတောင် ဟိုး…….ဘက်ရွာကိုလှေနဲ. ကိုညွန်.မြန်မြန်လှော်ပါတော့ဆိုတော့ အေးပါမမယ်ရင်ရ မင်းမလဲ ပူတတ်ရန်ကောနဲ.။မတည့်ပါဘူးအေ ညည်းတို.ဘိုးအေ။ ကလေးသာ ၁၂ ယောက်ရရော ကြည့်လို့ကိုမရဘူး။ ၁၂ယောက်သာမွေးလိုက်ရတာပါ။ အဖတ်တင်တာက ၅ရောက်ထဲရယ်။ ရှားရှားပါးပါး သားကတစ်ယောက်ထဲရယ်။ ထူးချွန်ချက်တော့ ဆရာဝန်လောင်းပ။ သူနဲ့ရတော့ စီးပွားတော့ အဖြစ်သားလား သူက ဆီစက်တစ်စက် ကိုယ်ကဆီစက်တစ်စက် နှစ်စက်ပြိုင်လိုက်တာပ။ ကမ္ဘာ ချစ် ဆီစက်ဆို မသိတဲ့လူမရှိဘူး။ ဆံပင်ကောင်းတိုင်းလည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတော်ရေ။ တစ်ရက်သား လည်နေတဲ့တာလပတ်ကြားဆံပင်ပါသွားလို ပေါင်တစ်ခြမ်းနဲ့ ဦးရေပြားပါသွားသေးသဟဲ့။ ကံကောင်းလို.အသက်မပါတယ်။ စီးပွားရေးကောင်းလို. အလှူအတန်းမလုပ်တန်ကောင်းရဲ့လို. မတွေးလိုက်ပါနဲ့အေ။ ကျုပ်တို.က အလှူရေစက်လက်နဲ့မကွာပါ။ မြို.ပေါ်ကစာသင်တိုက်မှာလဲ ရှင်ရဟန်းတွေကို မောင်ပဇင်းတက်ပေးတာ ၅ပါးရှိပါရဲ့။ အိမ်မလည်း ဆွမ်းခံကိုယ်တော်က ၁၀ပါး။ အမြတ်ဆုံးက ကျုပ်တို့ ရွာကဘုရားကိုပြင်လိုက်ရတာပါ။ ရွှေသင်္ကန်းလုံးတော်ပြည့် ကပ် ထီးတော်အလှူလဲပါပေါ့။ ရွာလုံးကျွတ် ၀န်ကြီးလေးပါးနဲ့ ကျွေးတာတော့ ကျုပ်ရွာသားတွေမယ်အားရပါးရ စားပုံများမြင်ရင် ထပ်လှူချင်စိတ်ပေါက်ရဲ့။ အဲဒီဘုရား ကျုပ်တစ်သက်လုံး ရာသက်ပန်လှူမယ် ပြုပြင်မယ်လို.ကို တစ်ထိုင်တည်း ဆုံးဖြတ်ဖြစ်သွားတာ။ ကျုပ်သိပ်ချစ်တဲ့ရွာက ရွေ.ဖြစ်တာလား။ ဓါးပြပေါ့တော်။ ပစ္စည်းယူရုံဘယ်ကမလဲ လူကလည်းအရိုက်ခံရသေး။ နည်းနည်းပါးပါးမဟုတ်ဘူး ဆန်ပြုတ်ကို ၂ ရက် ၃ရက်အသာလေးသောက်ရတာပေါ့။ ကြီးလာတော့ အိမ်မှာရှိရှိသမျှတံခါးတွေကို မှောင်ရင်ပိတ်ရမှဆိုတဲ့ အထိကိုလွှမ်းမိုးခဲ့တာသာကြည့်တော့။ှ ပြီးတော့ ကျုပ်တို.လင်မယားပိုင်ဆီစက်ကလေးတွေ ပြည်သူပိုင်တဲ့တော်။ နီးစပ်ရာမြို.ကိုတက်ရတာပေါ့။ ကလေးတွေလက်ဆွဲပြီး အပြေးအလွှားတက်ခဲ့ရတာပေါ့။
တက်သာလာခဲ့ရတယ်။ တစ်ရက်မှမေ့မရပါဘူးတော်။ ရွာပြန်ချင်တာပါပဲ မတတ်သာလို.သာ။ ရွာဦးကဘုရားကြီးဆိုတာ ပြန်မပြင်ရတာကြာလာပါပကော။ ဒီခေတ်ကြီးမှာ ပြန်ပြင်နိုင်ဖို.ကလည်းခက်သားလား။ အဲဒီတော့ ရွာကဘုရားကြီးပြင်ချင်တယ်ဆိုတာကိုသာ ရွတ်နေရတာပါပဲ။ သို.ပေမယ့်လည်း……
အစိန္တေယျအစချီဘုရားရှိခိုးကို ဌာန်ကရိုဏ်းကျကျရွတ်တတ်သော၊ တပြည်လုံးက ဘုရားတွေကုန်အောင်ရှိခိုးတတ်သော၊ ကော်ဖီသိပ်ကြိုက်သော၊ စည်းကမ်းကြီးသော၊ သင်္ကြန်ဆိုပိတောက်ပန်းတွေတခေါင်းလုံးဝေအောင်ပန်တတ်သော၊ သရက်သီးတွေကို ပေါက်တတ်သော၊ ထညက်ကြိုက်သော သော့တွေမျက်မှန်တွေ ခဏခဏပျောက်တတ်သော ကျနော့ရဲအဖွားကိုအမှတ်တရ
picture is copy from http://www.scottpix.com/gallery/travel/myanmar/4608.html
Posted by ရွာသားလေး at 11:45 PM5comments Links to this post
Posted by ရွာသားလေး at 9:34 PM3comments Links to this post
ဒီနေ. တနင်္ဂနွေ။ ပြီးတော့ တနင်္ဂနွေည။ အဲဒီတော့ ကျနော်လွမ်းရတတ်သော သောကြာည ကိုသာမျှော်မှန်းတမ်းတရသည်ချည်း။ သြော် ဒီနေ.ည သောကြာညများ ဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုပြီးလေ။ ဖြစ်မှမဖြစ်နိုင်ပဲနော်……
ကျနော့အလုပ်က တနင်္လာကနေ သောကြာအထိ ငါးရက်ထဲသာ။ နှစ်ရက်ပိတ်ခြင်းကို အခွင့်အရေးထူးတစ်ရပ်လို ပဲ အများကသတ်မှတ်ကြတာကိုး။ ဒါပေမယ့်နှစ်ရက်သာပိတ်တယ် ပိတ်တဲ့နှစ်ရက်က ဘယ်တော့မှ မလောက်ငှ။ ဖြစ်နိုင်ရင် လေး ငါးဆယ်ရက်ပိတ်လိုက်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တရုတ်နှစ်ကူး လေးရက်ပိတ်တော့ လည်းမလောက်ပြန်ဘူး။ လူ.အလို တကယ်ကို ဘာမှလိုက်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလေနော့။
ကျနော့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သူငယ်ချင်းဟောင်းကတော့ အမြဲ happy Friday ဆိုတဲ့ sms ဒါမှမဟုတ် သူရွတ်နေကျ ဒန်တန်တန်ဆိုပြီး ပျော်နေတဲ့ ပုံအမြဲ ပြနေကြ။ အခုတော့ သူက ပို.စရာမလိုတော့ဘူးလေ။ ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာက ကျနော်က အဲဒီ sms လေးကိုပို.တော့ တချို. ကပျော်တယ်လို.ပြန်ကြသလို စနေဆင်းရတဲ့လူတွေကတော့ :( လို.ပြန်ကြပါတယ်။ ဟုတ်မှာပါ ကျနော် စနေဆင်းရတုန်းကလည်း အဲလိုပါပဲ။
ရုံးမှာတစ်ခေါက်ဆွေးနွေးကြတုန်းကလည်း တနင်္ဂနွေညရဲ့ သောကြာအလွမ်း ကိုကျနော်သာမက အစ်ကိုကြီးများကလည်း လွမ်းကြပါတယ်တဲ့။ အားလုံးလွမ်းကြတဲ့ အလွမ်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မကြာခင်မိနစ်ပိုင်းမှာ တနင်္လာနေ.ကို ကူးပြောင်းတော့မှာပါ။ နေ.သစ်မှာ စိတ်သစ်ခွန်အားသစ်နဲ. လုပ်ငန်းခွင်ကို ၀င်ပြီး နောက်တပတ်ရဲ့ တနင်္ဂနွေညရဲ့ သောကြာအလွမ်းကို လွမ်းဖြစ်အောင်ကိုလွမ်းနေမှာ…..
Posted by ရွာသားလေး at 11:28 PM4comments Links to this post
တကယ်ကို ခဏတာလေးပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီခဏတာလေး ဟာ ကျွန်တော်တို. အတွက်ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြမယ်ဆိုရင် ခဏတာပေါင်းများစွာကို လောဘကြီးစွာလိုချင်နေခဲ့မိပါတယ်။
မနေ.က ကျနော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ. Gtalk ထဲမှာစကားပြောဖြစ်ကြပါတယ်။ သူနဲ.ကိုနဲ. က အမိမြေရဲ.ဝေးတဲ့တစ်နေရာဆီမှာ ကိုယ်စီကိုယ်ငှ ရောက်နေကြပြီး တစ်လတစ်ခါလောက်တောင်တွေ.ဆုံဖို.ခက်ခဲနေကြလေ။ သူ.ဆီက အချိန်ရယ် ကို့ဆီက အချိန်ရယ် ကွာခြားတာကတစ်ကြောင်း သူအားတဲ့အချိန်ရယ် ကိုယ်အားတဲ့အချိန်ရယ် ကလည်းတူညီနိုင်ဖို.ခက်ခဲ။
ဒီသူငယ်ချင်းက သင်တန်းတစ်ခုမှာ ဆုံခဲ့ရပြီး ပြောမနာဆိုမနာ ငယ်သူငယ်ချင်းလို။ ကိုယ် အားငယ်ရင်ကို.ကို အားပေး သူအားငယ်ရင်သူ.ကို အားပေးခဲ့မြဲ။ သူတို.နိုင်ငံရပ်ခြားသွားတော့မယ်ဆိုတော့ ကို.ကို သတိတရလာရောက်တိုင်ပင် ခေါ်ကြတာကို ကိုယ်သတိရမိတယ်။ အဲဒီအချိန်က ညနေခင်းတစ်ခုမှာပေါ့။ သင်တန်းပြီးဆုံးရင် ရတဲ့အခွင့်အလမ်းနဲ. သွားချင်တယ် ကိုယ့်ကိုလည်း လိုက်ခဲ့စေချင်တယ်ပေါ့။ သူငယ်ချင်းရယ် ဘ၀တက်လမ်းအတွက်ကိုယ်ကိုတိုင်လည်း လိုက်ချင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခွင့်မသာခဲ့ဘူးလေ။ မင်းတို.ပြောတဲ့ သိန်းငါးဆယ်ဆိုတာ ကိုယ့်အတွက်အလှမ်းကွာဝေးလှပါတယ်။ အဲလိုနဲ. မင်းတို.နှစ်ယောက် မရောက်ဘူးတဲ့ အရပ်ဒေသမှာ ဆွေမျိုးမရှိ အပေါင်းအသင်းမရှိ ရဲရင့်ခြင်းကို ပိုက်ပြီးရောက်အောင်သွားခဲ့ကြတယ်။ ဂုဏ်ယူပါတယ်သူငယ်ချင်း။ မင်းတ်ို.နှစ်ယောက်အခက်အခဲတွေ ပေါင်းများစွာကို ခါးသီးမျက်ရည်စတွေနဲ. ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရမယ်ဆိုတာ ကိုယ်သိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်ဂုဏ်ယူမိတာပါ။
မင်းတို.နဲ.ကိုယ် အဆက်အသွယ်တော်တော်ပြတ်ခဲ့ကြတယ်။ အမိမြေရဲ့ ဆက်သွယ်ရေးက တံတိုင်းကြီးလိုကာဆီးထားတယ်လေ။ ဆက်သွယ်ရေးကောင်းလာတဲ့တစ်နေ.မှာ မင်းတို.နဲ. အဆက်အသွယ်ရတယ်။ မင်းတို.ကိုယ်.ဆီ ဖုံးတွေအားရပါးရပြောခဲ့ကြတယ်။ ပြောလို.လဲမကုန်နိုင်ဘူးနော်။ နေကောင်းလား အဆင်ပြေရဲ့လားဆိုတာ လောက်ထပ်မကပေါ့နော်။
ကိုယ်လည်းအပြင်ရောက်လာတော့ ပိုပြီးဆက်သွယ်ဖြစ်ကြပါတယ်။ အရင်ထက်စာရင် တစ်လ တစ်ခါလောက်တွေ., ပြောဖြစ်ကြတယ်။ မှတ်မိသေးတယ်ကိုယ်စရောက်ပြီး မကြာခင်မှာ မင်းတို.ဖုံးဆက်ကြလို. နာရီပေါင်းများစွာ ပြောဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ ပြောလက်စတွေမကုန်ပင်မယ့် တကယ့်လက်တွေ.ဘ၀ကို ပြန်လည်ဝင်ရဖို. တစ်ယောက်နဲ.တစ်ယောက် အားပေးရင် အိပ်ပျော်သွားကြတာချည်း။
သူငယ်ချင်းရယ် အဲဒီခဏတာအချိန်လေးတွေဟာရှားပါးပင်မယ် တကယ့်ကိုတန်ဖိုးရှိပြီး ခဏတာပေါင်းများစွာကို ကိုယ်တို.တွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြရင်ကောင်းမယ်ကွာ………..
Posted by ရွာသားလေး at 11:27 AM2comments Links to this post
ဒီစာလေးကို ထုံးစံအတိုင်း forward email ကနေ ဒီနေ.ရလိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ရင်းနဲ. အားလုံးနဲ. ကိုက်ညီမယ်ထင်လို. တင်ပေးလိုက်တာပါ။ စာရေးသူက ပန်းအိမိုးပါတဲ့။ ဘယ်မှာပါမှန်းလည်းမသိသလို စာရေးသူဆီက ခွင့်တောင်းဖို.လည်း ဆက်သွယ်စရာ လည်းမသိပြန်ဆိုတော့ ကျနော့ရဲ့ကူးယူဖြန်.ဝေမှုကို စာရေးသူသိရင်ခွင့်လွှတ်တန်ကောင်းပါတယ်။ သိပ်ကောင်းတဲ့စာလေးဆိုတာ အားလုံးသိစေချင်လို.ပါဗျာ။
ဒီနေ. သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ရုံးခန်းမှာ video clip လေးတစ်ခု ကြည့်ခဲ့ရတယ်။
The Story Of Eagle “လင်းယုန်ပုံပြင်” တဲ့။
လင်းယုန်တစ်ကောင်ဟာ သက်တမ်း ၇၈နှစ်ဝန်းကျင်အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ လင်းယုန်ဆိုတာ ကောင်းကင်မှာ သတ္တိရှိရှိ၊ အင်အားပြင်းပြင်းပျံနိုင်တဲ့ ငှက်မျိုး။
လင်းယုန်တစ်ကောင်ဟာ သက်တမ်း ၄၀ လောက်ရလာတဲ့အခါမှာ အဲဒီလင်းယုန်ဟာ ကောင်းကောင်းမပျံနိုင်တော့ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူ.ရဲ့ နှုတ်သီးဟာ ကွေးလာပြီး ရင်ဘတ်ထိအောင် စိုက်ကျလာတယ်။ အတောင်ပံတွေဟာ မခတ်နိုင်တော့လောက်အောင် လေးလာတယ်။ လက်သည်းတွေဟာ ရှည်လျားလာပြီး အစာရှာဖို.ခက်လာမယ်။ အဲဒါဟာ လင်းယုန်တိုင်းပါပဲ။
အဲဒီမှာ ရွေးချယ်စရာ လမ်းနှစ်ခု ရှိတယ်။
တစ်ခုက ကောင်းကောင်းမပျံတော့ဘဲ သေပွဲဝင်ရမယ့် နေ.ကိုထိုင်စောင့်ဖို.။
နောက်တစ်ခုကတော့ ကျန်တဲ့သက်တမ်း ၃၈နှစ်ကို ကောင်းစွာပျံသန်းရင်း အသက်ဆက်ရှင်သန်ဖို.။ အဲဆက်ပြီးရှင်သန်ဖို.ဆိုရင်တော့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကို အဖြစ်မနေဖြတ်သန်းရမယ်။ အဲဒီဖြစ်စဉ်နာမည်က Pain and Difficulites “နာကျင်မှု နဲ့ အခက်အခဲ” ။
ပထမဆုံး ကျောက်တောင်ထိပ်ကြီးတွေပေါ်ကို ပျံသန်းသွားရမယ်။ အဲဒီ ကျောက်တောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်ရင် နှုတ်သီးကို ကျောက်သားနဲ.ဖဲ့ချိုးပစ်ရမယ်။ တစ်ခါနှုတ်သီး နဲ. လက်သည်းတွေကို ဆွဲခွာပြီးနှုတ်ပစ်ရမယ်။
ဘယ်လောက်များနာကျင်လိုက်လေမလဲ။ ဘယ်လောက်များ ခက်ခဲလိုက်လေမလဲ။ ကိုယ်တိုင်လုပ်ရတာ။ အသက်ရှင်ချင်သူကိုယ်တိုင်လုပ်မှရတာမျိုးပါ။
ပြီးရင်တော့ ရက်အနည်းငယ်ကြာကြာ တောင်ထိပ်မှာနေပြီး လက်သည်းတွေ နှုတ်သီးတွေ ပြန်အသစ်ထွက်ပြီး အသားကျလာတဲ့ အထိစောင့်ရတယ်။ ပြီးရင်တော့ အဲဒီလင်းယုန်ဟာ ကျန်တဲ့သက်တမ်း ၃၈ နှစ်ကို ရှင်သန်ခွင့်ရသွားပြီ။
ဒုတိယလမ်းကို ရွေးချယ်ကြတဲ့လင်းယုန်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ကျွန်မတို.ကလူသားတွေပါ။ ငှက်တွေတောင် အကျိုးစီးပွား တစ်ခုအတွက်နာကျင်မှုနဲ့ အခက်အခဲဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကို ကျော်နိုင်သေးရင် ကျွန်မတို.လို လူသားတွေက ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေ အရောက်သွားဖို. ဆက်လက်ရှင်သန်နေဖို. “နာကျင်မှု နဲ့ အခက်အခဲ” ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို မဖြစ်မနေ ရင်ဆိုင်ရဲရမှာပေါ့။
ကျွန်မတို. လိုချင်တဲ့ပန်းတိ်ုင်ကို အရောက်သွားဖို. တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်မတို.တစ်တွေ အရမ်းနာကျင် ကြရမယ်။ အခက်အခဲတွေ မရေမတွက်နိုင်အောင်ကျော်ဖြတ်ကြရမယ်။ ကျွန်မတို. ကျော်ဖြတ်ကြမယ်လေ။ အဲဒီ “နာကျင်မှု နဲ့ အခက်အခဲ” ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို ကျွန်မတို. အတူတူဖြတ်ကျော်ကြရအောင်ပါလေ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်မတို့အားလုံးကျန်တဲ့သက်တမ်းတွေကို အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ ရှင်သန်ရဦးမှာမို့ပေါ့။ ကျွန်မတို့တွေဟာ လက်မြှောက်အရှုံးပေးကြမယ့်သူတွေ မဟုတ်လို့ပေါ့။
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က စိတ်ဓာတ်အကြီးအကျယ်ကျနေတဲ့ ကျနော် ဒီစာကိုဖတ်ပြီးခွန်အားတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျနော့မိတ်ဆွေတွေ အားလုံးပဲ ကျနော့လို ခွန်အား ရရှိပါစေဗျာ။ ကျနော်စိတ်ဓာတ်ကျရင် အမြဲဖတ်တဲ့ စာအုပ်သုံး အုပ်ရှိပါတယ်။ တစ်အုပ်က ဘာသာပြန် ပါပီလွန်နဲ့ဗင်ကို ဖြစ်ပြီး တစ်အုပ်က ဘာသာရေး တစ်ယောက်တည်းပျော်အောင်နေ နဲ. နောက်တစ်အုပ်က မြကြာဖြူ တို့ပါပဲ။
Posted by ရွာသားလေး at 7:35 PM9comments Links to this post
Posted by ရွာသားလေး at 9:16 PM2comments Links to this post
မယုံမရှိနဲ.ဗျ။ ကျနော်ပိုင်တဲ့ မျက်နှာဖုံးတွေ အားကြီးရှိတာ။ ဘုရားပွဲက ၀ယ်တာလား။ လုံးဝမဟုတ်ဘူး။ ကျနော်ကိုယ်တိုင် သေသေချာချာလုပ်ထားတာ။ ပေါ့သေးသေးတော့မထင်လိုက်ပါနဲ.။ တကယ်ကို အသုံးဝင်ပါတယ်…….
ငယ်ငယ်မွေးတုန်းကတည်းက မျက်နှာဖုံးပါတယ်လို. ပြောပါတယ်။ အခုတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ အသက်ကြီးလာတာနဲ.အမျှ မျက်နှာဖုံးတွေက တိုးလာတာပေါ့ဗျာ။ ဘယ့်နဲ.ပြောရမလဲ။ အလှူမင်္ဂလာ ပွဲတက်တာကတစ်မျိုး၊ ဘုရားသွားကျောင်းတက်က တစ်သွယ်၊ စည်းရုံးရေးအတွက်က တစ်ဖုံ စုံအောင်စီစဉ်ထားရတာဗျ။ အဲဒါတွေက အထူးစပယ်ရှယ်နော့။ နေ.စဉ်ရိုးရိုးအတွက်လား မပူပါနဲ. ကိုယ်နဲ.မကွာဆောင်ထားတာက အမျိုး ခြောက်ဆယ်လောက်ပါပဲ။ ဗျာ နည်းသေးတယ်ထင်လို.လား လျှပ်တပျက် အတွက်လက်တကမ်းအကွာလောက်မှာ သုံးလေးဆယ်လောက်ရှိပါသေးတယ်။ အော် မိဘဘိုးဘွားပိုင်တွေလို.ထင်လို.လား ကျနော့ကိုများ အထင်သေးလိုက်တာဗျာ။ ကိုယ်ပိုင်ဗျ ကိုယ်ပိုင်။ ကျနော်သေသွားရင်ကော သားစဉ်မျိုးဆက် အမွေပေးရမယ်။ မဖြစ်နိုင်လိုက်တာများဗျာ ကိုယ်ဒူးကိုယ်ချွန် ကိုယ့် ဟာကိုယ်ထွင်မှပေါ့ဗျ။ လုပ်နည်းကိုင်နည်း ဟာ... အဲဒါ အဓိက သော့ချက်။ မိဘရှာဖွေတာကို အလိုက်သင့် နို.သက်ခံစို.တာမျိုး ကျနော်က အားမပေးဘူးဗျ။ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲ ငှက်ပျောသီးအခွံနွှာသလောက်ကို လွယ်လွယ်လေး။ အလိုက်သင့်လေးပြောင်းသွားတာပါပဲ။ သူ.အရပ်နဲ.သူ.ဇာတ်ကတော့ ကွက်တိ။ လေ့ကျင့်မှု ဟား…ဟား…..ဟား…..တော်တော်ရီရတဲ့စကားလုံးဗျာ လုံးဝကိုမလိုအပ်တဲ့အရာပဲ။
ခင်ဗျားတို.ကစိတ်ဝင်စားတယ်။ ဟုတ်မှလဲလုပ်ပါဗျာ တော်တော်ကြာ အမြင်မတော်ဆင်တော်နဲ.ခလောက်ဖြစ်နေပါအုံးမယ်။ တစ်ခြားမဟုတ်ပါဘူးဗျာ ခင်ဗျားတို. ရဲ့ မျက်နှာဖုံးကို ခွာဖို.မေ့နေအုံးမယ်လို.ပြောမလို.ပါ……………..
Posted by ရွာသားလေး at 12:12 AM5comments Links to this post
Posted by ရွာသားလေး at 11:26 PM3comments Links to this post
တရက်မှာ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း အကြောင်း ဆွေးနွေးခိုက် ဘုရားများ၊ စေတီပုထိုးများရဲ့ ဗိသုကာ လက်ရာများ အကြောင်းကို သမိုင်းကြောင်းနှင့် ယှဉ်ပြီး ဆွေးနွေးစဉ် မောင်မင်းကြီးသားက တစခန်းထ လာပါတော့သည်။ ဂျာမန်လူမျိုး ဆရာက ရွှေတိဂုံ ဘုရား၏ တည်ထားပုံကို ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ် စာရင်း သွင်းရပုံကို ချီးကျူးပြောဆိုရာ သူက ဟိန္ဒူ ဘုရားကျောင်းများရဲ့ ရှေးကျပုံ၊ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၃၀၀၀မှ ၅၀၀၀ အလွန် ကပင် ဟိန္ဒူ ဘုရားစေတီများ တည်ထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပုံ၊ နောက်ပိုင်း ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုရားစေတီ များမှာ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်ခန့်သာ ကြာသေးပုံ တို့ကို ပြောပြီး ရွှေတိဂုံဘုရားသည် ဟိန္ဒူ ဘုရားစေတီ တည်ထားပုံကို နမူနာယူ အတုခိုးပြီး တည်ထားခြင်း မျှသာ ဖြစ်သည်ဟု ပြောပါလေတော့သည်။
စကားရည်ပြိုင်လုရန် စိတ်မပါလှသော ကျွန်မလည်း သည်နေရာ တွင်တော့ ငုံ့မခံနိုင်တော့ပါ။ ထို့ကြောင့် ဟိန္ဒူ ဘုရားစေတီများသည် အောက်ခြေအုတ်ခုံကို ဖြစ်စေ၊ မြေပေါ်ပိုင်း အဆောက်အဦကို ဖြစ်စေ အ၀ိုင်းပုံနှင့် အခုံးပုံကို အခြေခံပြီး ဆောက်လုပ်ထားကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိဖူးပါသည်။ မှန်သလားလို့ အရင်ချည် လိုက်ပါတော့သည်။ မှန်ကြောင်းနှင့် မြန်မာများသည် သူတို့ဟိန္ဒူစေတီတည်ပုံကို လေ့လာထား သည်ကို ချီးကျူးပါကြောင်း အချွန်နဲ့ မလေသည်။ ထိုအခါမှ ကျွန်မလည်း၁. ရွှေတိဂုံဘုရားသည် အပေါ်မှ မိုးကြည့်လျှင် ပန်းတင်ခုံခေါ် အောက်ခြေအုတ်ခုံကို လေးထောင့်ကျကျ စတုရန်းပုံဆောက်လုပ်ထားကြောင်း၂. ပန်းတင်ခုံပေါ်တွင်မှ ပစ္စယာ သုံးဆင့်ခေါ် လှေကားထစ်သဖွယ် ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကို ဆဌဂံ မှ အဆင့်ဆင့် အဌဂံပုံသို့ ပြောင်းလဲ တည်ဆောက်ထားကြောင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်မှာ စတုရန်းမှ စက်ဝိုင်းပုံသို့ ပြောင်းလဲ သွားဟန်ကို မျက်စိ ပသာဒ ဖြစ်ဖွယ် ပြေပြေလေး ပြောင်းလဲယူခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၃. ပစ္စယာ သုံးဆင့် ပေါ်တွင် အမျှဝေခြင်း အထိမ်းအမှတ် ခေါင်းလောင်း မှောက်ကို တည်ထားရာ ခေါင်းလောင်းခြေမှာ အခွက်ပုံဖြစ်ပြီး ခေါင်းလောင်း စည်းရဲ့အပေါ်ပိုင်းမှာ အခုံးပုံဖြစ်ကြောင်း၊ အခုံးနဲ့ အခွက်ကို ကြည့်သူရဲ့ အမြင်တွင် သဟဇာတဖြစ်အောင် ဆက်ထားပုံကို ပညာယူနိုင်ကြောင်း၎. ခေါင်းလောင်းမှောက်ရဲ့ အထက်တွင် ကြာမှောက် ကြာလှန်ကို တည်ထားပုံမှာလည်း သည်သဘော တရား ပင် ဖြစ်ကြောင်း၅. ငှက်ပျောဖူးတွင် အထက်သို့ ရှူးတက်သွားပြီးမှ ထိပ်ဆုံးတွင် ထီးတော်နဲ့ ပြန်အုပ်ထားသော ဒီဇိုင်းမှာ လည်း ဖူးမြော်သူရဲ့စိတ်ကို ထိပ်ဆုံးသို့ အာရုံစုစည်းစေပြီးမှ ထီးတော်ကို ကြည်ညိုနိုင်စေရန် ဆွဲဆောင် သော ဗိသုကာဖြစ်ကြောင်း၆. ပုထိုးတော် ဒီဇိုင်းဖြစ်သော အာနန္ဒာ ဘုရားသည် ထိပ်ပိုင်းက ဟိန္ဒူ ဒီဇိုင်းဟု ထင်ရသယောင်၊ ဆင်သ ယောင် ရှိသော်လည်း လိုဏ်သုံးထပ် လုပ်ထားပုံမှာ လုံးဝမတူ ခြားနားခြင်းရဲ့ သက်သေဖြစ်ကြောင်း၊ ရွှေတိဂုံ ကဲ့သို့ မတည်ရခြင်းမှာ အပူပိုင်းဒေသ ရပ်ဝန်းတွင် တည်ရသည့်အတွက် ဘုရားဖူးလာသူများရဲ့ ကြည်ညိုစိတ်ကို ဖန်တီးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး ပုထိုးတော်ကဲ့သို့ တည်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ လိုဏ်နံရံများရှိ ကျောက်ပန်း ဇကာများသည် အကောင်းဆုံး သက်သေ ဖြစ်ကြောင်း၊ အပြင်ဘက်ဆုံး ကျောက်ပန်း ဇကာသည် ဖုန်စစ်ရန်၊ အလယ်နံရံရှိ ကျောက်ပန်း ဇကာသည် နေရောင်စစ်ရန် ဖြစ်ပြီး အတွင်းဘက်ဆုံး ရုပ်ပွားတော်များ တည်ထားရာ ဂန္ဓကုဋီ၏ နံရံရှိ ကျောက်ပန်း ဇကာသည်ကား လေပူစစ်ရန် ဖြစ်ကြောင်း ကျောက်ပန်း ဇကာများရဲ့ ဒီဇိုင်းကို ကြည့်ပြီး သိနိုင်ကြောင်း။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဘုရားဖူး လာသူသည် နေပူ၊ လေပူ၊ ဖုန်ထူ တို့ကို ဖြတ်ပြီး ဘုရားဖူး လာရာတွင် ပုထိုးတော် ထဲသို့ ရောက်သည်နှင့် လူရော စိတ်ပါ အေးချမ်း တည်ငြိမ် သွားစေရန် ရည်ရွယ်ကြောင်း၊ နေပူထဲမှ လာသော စိတ်ပျံ့လွင့် နေသော ဘုရားဖူးသူကို အလင်းရောင် စစ်ထား သောကြောင့် မှောင်သယောင် အလင်းမှိန်သော ပုထိုးတော်ထဲတွင် စိတ်ကို တည်ငြိမ် စေပြီးမှ ရုပ်ပွားတော် ပေါ်တွင်သာ အလင်းကျ ရောက်နေ စေရန် စီစဉ်ထားသော ဗိသုကာ လက်ရာကြောင့် အမှောင်ထဲတွင် လင်းနေသော ရုပ်ပွားတော်ကို ဖူးမြော်စေလေရာ ကြည်ညို သဒ္ဓါစိတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေ ကြောင်း၊ စိတ်ပညာကိုပါ အသုံးပြုကာ ဘုရားကို ထိုကဲ့သို့သော ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ဖြင့် ဆောက်လုပ်သော ဗိသုကာလက်ရာကို အရှေ့တောင် အာရှ တခွင်တွင်ရော၊ တကမ္ဘာလုံး တွင်ပါ မမြင်ဖူး သေး သောကြောင့် ရှိလျှင် လမ်းညွှန်ပါရန်နှင့်ထိုထိုသောအကြောင်းတို့ကို ဟိန္ဒူဘုရားများ တွင်သာမက မည်သည့်လူမျိုး၊ ဘာသာရဲ့ အထိမ်းအမှတ် မှာမှ မမြင်ဖူး သောကြောင့် မြန်မာ့လက်ရာ ဗုဒ္ဓဘာသာ စေတီပုထိုးများရဲ့ ဗိသုကာ လက်ရာသည် အတုမရှိ၊ ကိုယ်ပိုင် လက်ရာသာ ဖြစ်ကြောင်း အပြတ် ဖြတ်ချရလေသည်။ ထိုအခါ ထိုအိန္ဒိယကျောင်းသားမှအပ ကျန် နားထောင်နေသူများ အားလုံးက လက်ခံ ခေါင်းညိတ်ကြပြီး ဂျာမန် ဆရာကမူ လက်ခုပ်တီး အားပေးလေ သည်။ သည်စကားရည် လုသလို ဖြစ်သွားသော အတန်းတွင်း စာဆွေးနွေးပိုင်းတွင် အမှတ်များစွာ ရလိုက်ပြီး ထိုဘာသာတွင် ဂုဏ်ထူးထွက် ခဲ့ပါသည်။သို့သော် ကျွန်မကမူ ကျွန်မ အဖြေကို လုံးဝ မကျေနပ် ခဲ့သေးပါ။ သည်မျှလောက် မကသေး ဟု ယုံကြည် လက်ခံ ထားမိပြီး မိမိကိုယ်ကို လုံးဝမကျေနပ်ပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးများသည် ဘုရားစေတီ ပုထိုးများ သို့ ပုံမှန် မဟုတ်တောင် မကြာခဏ သွားလာ ဖူးမြော် ကြသည်။ အထူးသဖြင့် နေ့ကြီးရက်ကြီးများတွင် လူငယ် လူကြီးမရွေး ဘုရားဖူး သွားကြလေသည်။ သူလိုကိုယ်လို ဘုရားဖူးနေကျ ဖြစ်သောကြောင့် ဖူးမယ့် သာ ဖူးလိုက်သည်။ ဘုရားကို ဘာလို့ သည်လို တည်ထား သလဲ ဆိုတာ၊ ဘုရားမှာ ဘာလို့ သည်လိုနေရာ တွေ ထည့်ထားသလဲ ဆိုတာ တခါမှ မစဉ်းစားဖူးခဲ့ပါ။ စပ်စုတတ် လွန်းသည်ဟု သတ်မှတ်ခံရသော ကျွန်မ လိုက်မေးသမျှ၊ လိုက် စုံစမ်းသမျှ အထက်မှာ ပြောဆိုခဲ့သလောက်သာ သိခဲ့ရ၊ မှတ်သားခဲ့ရ ဖူးလေသည်။ဘာကြောင့် ပန်းတင်ခုံလို့ခေါ်ပြီး သည်လိုပုံစံ တည်ထားရသလဲ။ ဘာကြောင့် ပစ္စယာ ကို ၃ဆင့် ထားရ သလဲ။ ဘာကြောင့် ခေါင်းလောင်းမှောက်မှာ ရင်စည်းကို ဘာ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ ထည့်ထားသလဲ။ ဘုရားမှာ ဘာကြောင့် ကြောက်စရာ ဘီလူးပန်းဆွဲ ဆိုတဲ့ပုံနဲ့ ဗိသုကာ လက်ရာ ပါနေရသလဲ။ ဖောင်းရစ်က ဘာလို့ ခုနှစ်ရစ် ဖြစ်နေရသလဲ။ ကြာကို ဘာကြောင့် မှောက်လိုက် လှန်လိုက် ထည့်ထားရသလဲ။ ဘာကြောင့် ကြာပန်းကိုမှ ရွေးထည့်ရသလဲ.. စသည် စသည်ဖြင့်ယနေ့တော့ စိတ်နည်းနည်း ပါသဖြင့် တရားနာရန် အခွေရွေးရာ ဓမ္မစေတီဆရာတော် ဦးကောသလ ဟော သော နှလုံးသားဝယ် ဘုရားတည် ဆိုသော တရားခွေကို ရွေးလိုက်သည်။ မမျှော်လင့်ဘဲ ဆရာတော် ဟော သော တရားတော်ထဲမှာ ကျွန်မသိချင်လှသော ဘုရားတည်ရခြင်း အကြောင်းရင်းများကို နာလိုက်ရသဖြင့် မျက်ရည်လည်အောင် ၀မ်းသာမိရပါသည်။၁. ပန်းတင်ခုံကို အကျယ်ဆုံးနဲ့ အောက်ဆုံးမှာထားတာဟာ လူ့စိတ်တွေထဲမှာ လောကုတ္တရာနည်းနဲ့ ပိုင်းခြားရင် အဆင့်အနိမ့်ဆုံးလူမှာ လိုချင်မှုတွေ အများဆုံးဖြစ်လို့ အောက်ဆုံးက ပန်းတင်ခုံကို အကျယ်ဆုံး ထားပေးပြီး ဥပမာပေးခြင်း၊ ဘုရားကို ပန်းကပ်လှူလိုသူတွေ ပန်းတင်လို့ရအောင် အမြင့်ခုံပုံ ဆောက်လုပ်ပေးထားခြင်းကြောင့် ပန်းတင်ခုံဟု အမည်ပေးခြင်း၂. ပစ္စယာ ကို ၃ဆင့် ထားရခြင်းမှာ တဏှာ ၃ပါးခေါ် လိုချင်မှုအုပ်စု ၃စုကို ရည်ညွှန်းကြောင်း၊ ယင်းတို့မှာ ဘ၀မရှိမှုကို လိုချင်ခြင်း (နိဗ္ဗာန်ကို လိုချင်မှုဖြင့် မရနိုင်၊ အရာအားလုံး သူ့သဘောနဲ့ သူ ဖြစ်ပျက်မှုကို သိပြီး အစွဲကျွတ်ခြင်းဖြင့်သာ နိဗ္ဗာန်ကို ရနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အကျင့်တရားမရှိဘဲ နိဗ္ဗာန်ကို လိုချင်ခြင်းသည် ဒိဌိ တမျိုးသာဖြစ်သည်။)၊ ဘ၀ကိုလိုချင်ခြင်း၊ ကာမဂုဏ်တရားများ (ရုပ်အဆင်း၊ အသံ၊ အနံ့၊ အရသာ၊ အတွေ့အထိ) တို့ကို လိုချင်ခြင်း ဟူသော လောကုတ္တရာနယ်ရဲ့ အောက်ခြေက တဏှာသုံးပါးကို သတိပေးရန် ပစ္စယာ ကို ၃ဆင့် ထားရခြင်း၃. ခေါင်းလောင်းမှောက်ခေါ် သပိတ်မှောက်ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်မှာ အထက်ပါ သံသရာလည်စေကြောင်း အချက်များကို မပြုလုပ်၊ လက်မခံ ဟူသော အဓိပ္ပာယ်ဖြင့် သပိတ်မှောက်သည်၊ ခေါင်းလောင်းမှောက်သည်ဟု လမ်းညွှန်ခြင်း ၄. သံသရာကို ဘီလူးလိုကြောက်ပြီး အထက်နိဗ္ဗာန် ပန်းကို လှမ်းဆွဲစေချင်သည်ဟူသော သတိပေးချက်ကို ဘီလူးပန်းဆွဲဖြင့် ဥပမာပေးခြင်း၊ ပုံပန်းသဏ္ဍာန် ၅ခုမြောက်တွင် ဘီလူးပန်းဆွဲကို ထားခြင်းမှာ ဥာဏ်စဉ် ၁၆ပါးရှိသည့်အနက် ၅ဆင့်မြောက် ဘယဥာဏ်ကို ညွှန်းဆိုလိုသောကြောင့် သည်နေရာတွင် ဘီလူးပန်းဆွဲ ကို ထားခြင်း၊ (အထက် မြန်မာပြည်တွင် ဘီလူးကို ပါအောင်ထည့်ပြီး အောက်မြန်မာပြည် တွင်မူ ဘီလူး ထားခြင်း အဓိပ္ပာယ်ကို တလွဲတွေးသဖြင့် လည်းကောင်း၊ ဘီလူးကို အပါယ်လေးဘုံသားဟု သတ်မှတ်ကာ ဘုရားတွင် မထားချင်သဖြင့် လည်းကောင်း ဘီလူးမပါဘဲ ပန်းဆွဲကိုချည့်သာ ထည့်လေ့ရှိသည်ကို သီးခြား မှတ်သား နိုင်ပါသည်။ ) သည်နေရာတွင် ပန်းဆွဲ ၁၆ခု ရှိနေသည်မှာ ရိပ်သာများတွင် ယောဂီများကို တရားစစ်ရာတွင် အဆင့်သတ်မှတ်သော သောတာပတ္တိ မဂ်ဥာဏ်ဖိုလ်ဥာဏ် မရခင် အခြေခံ ဥာဏ်စဉ် ၁၆ပါးကို ညွှန်းခြင်း
၉. ကြာလှန်သည် ထို ဥာဏ်စဉ် ၁၆ပါးလုံးကို ရရှိပြီးပါက သောတာပန် ဖြစ်ပြီ ဖြစ်ပြီး အောက်သံသရာကို ပြန်စရာမရှိတော့ဘဲ အထက် မဂ်ဖိုလ်များကို ရရှိကာ အလွန်ဆုံးခုနှစ်ဘ၀သာ သံသရာမှာ ကျင်လည်ရပြီး အထက် နိဗ္ဗာန်ကိုသာ ၀င်စံရသောကြောင့် အထက်သို့လှန်တက်နေသော ကြာလှန်ကို ပုံဥပမာ ပေးထားခြင်း၁၀. သင်္ကေတ၀ါဒ အရ ကြာပန်းကို ထားရခြင်းမှာ ရေမှာ နွံမှာ ပေါက်ဖွားသော ကြာပင်ဖြစ်လျက် ရေမစို၊ နွံမလူး၊ မွှေးကြိုင် သင်းပျံ့ခြင်း ရှိသော ကြာပန်းကဲ့သို့ လောကီနယ်မှ လူသားအဖြစ်မှ လောကုတ္တရာ နယ်သား ဘုရားဖြစ်အောင် ကျင့်ကြံ အောင်မြင်ရာတွင် ဘုရားနှင့်ကြာပန်း တို့တွင် အဓိပ္ပာယ် ဆင်တူသော ဂုဏ်ရည်ချင်းကို ဥပမာ ခိုင်းနှိုင်း လိုသောကြောင့် ကြာပန်းကို သုံးခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရား ဗျာဒိတ် ခံစဉ်တွင်လည်း ကြာပန်းကိုသာ ကပ်လှူခြင်း၊ ဖွားစဉ်ကလည်း ကြာပွင့်များ အလိုလိုပေါ်လာကာ ခြေချရာတိုင်း ခံလာရခြင်း တို့ကြောင့် ကြာပန်းသည် ဗုဒ္ဓ၏ သင်္ကေတ ဖြစ်ခြင်း၊၁၁. ထီးတော် (၇) ဆင့်သည် အထက်ဖိုလ် ခုနှစ်ပါးကို ပြဆိုခြင်း၁၂. ငှက်မြတ်နား ဆိုသည်မှာ ဘုရား၊ ရဟန္တာတို့ လက်ရှိဘ၀မှ နိဗ္ဗာန်သို့ မ၀င်စံမီ (သို့မဟုတ်) ပရိနိဗ္ဗာန် မပြုမီ ခေတ္တခဏ နားနေရာအချိန်အခိုက်အတန့်ကို ပြဆိုလိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ပြင် ရွှေတိဂုံဘုရား၏ ထို ဟင်္သာအမြီးပုံ ငှက်မြတ်နားတွင် ပတ္တမြားကို ထုလုပ်ထားသော ဘုရားရုပ်ပွားတော် လေးကို မြုပ်နှံဌာပနာ ထားခြင်းသည် အဓိကသက်သေဖြစ်ကြောင်း၊ ငှက်မြတ်နား ဟုခေါ်ဆိုလေ့ရှိသော်လည်း တကယ်တော့ အများသူငါ တွေးထင်သလို ငှက်မြီးပုံကို ငှက်မြတ်များကို ကိုယ်စားပြုသည်မဟုတ်ဘဲ နက္ခတ်ဗေဒင် ပညာ တွင် မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုသော ဟင်္သာပုံ နက္ခတ်ကို ယူကာ သည်စေတီကို တည်ထားကိုးကွယ်သော မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ အစွမ်းအစကို သမိုင်းမှတ်တမ်းတင်ရန်လည်းကောင်း၊ ထိုမြန်မာနိုင်ငံသားများရဲ့ ကုသိုလ် အကျိုး အထွဋ်အထိပ် သို့ ရောက်ပါစေခြင်း အကျိုးငှာလည်းကောင်း ဟင်္သာအမြီးသဏ္ဍာန် တည်ထားခြင်း၊၁၃. စိန်ဖူးတော် သည် အသင်္ခတဓာတ် နိဗ္ဗာန်မြတ်ကို ရည်ညွှန်းခြင်း။ အခြားဓာတ်များကို ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အာဟာရ တို့ဖြင့် ပြင်လို့ရနိုင်သေးသဖြင့် သင်္ခတဓာတ်ဟုခေါ်ပြီး နိဗ္ဗာန်သည်ကား မည်သို့မျှ ပြန်လည် ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုမရှိတော့သော ဓာတ်ဖြစ်သဖြင့် အသင်္ခတဓာတ်ဖြစ်ကြောင်းကို ရည်ညွှန်းခြင်း(က) ကာဗွန်ဒြပ်စင် သည် မီးသွေး၊ ကျောက်မီးသွေး၊ ဂျာမနီယမ်နှင့် စိန်ဆိုပြီး လေးဆင့်ရှိရာတွင် စိန်အဆင့်တွင် ကာဗွန်ဒြပ်စင်သည် အသန့်စင်ဆုံးအဆင့်ရောက်နေပြီဖြစ်သလို သောတာပန်၊ သကဒါဂမ်၊ အနာဂမ်နှင့် အရဟတ္တ မဂ်ဖိုလ်ရပြီးသူ ဘုရား၊ ရဟန္တာ တို့တွင် ထိပ်ဆုံးအဆင့် ဘုရားသည် ကိလေသာ လုံးဝစင်ကြယ်ဆုံး အဆင့်ရောက်နေသည်ကို ပြဆိုခြင်း၊(ခ) အမာဆုံး၊ အသန့်စင်ဆုံးနှင့် ဓာတ်ပြိုကွဲမှု လုံးဝမရှိတော့ခြင်း ဟူသော ဂုဏ်ရည်တူချင်း ခိုင်းနှိုင်းဥပမာပေးထားခြင်းသည်နေရာတွင် ငှက်မြတ်နားအဆင့်တွင် အခက်အလက်များမှာ ငှက်မြီးသဖွယ် ဖြာထွက်နေသော်လည်း စိန်ဖူးတော်ကို ဘာကြောင့် တလုံးတည်း ထားသနည်းဟူသော မေးခွန်းရှိလာပါသည်။ ရဟန္တာ ကိုယ်တော် ကြီး များသည်ကား အချင်းချင်းတွင် ဘုန်းချင်း၊ တန်ခိုးချင်း၊ ပညာချင်း၊ လာဘ်လာဘချင်း မတူညီဘဲ သံသရာတွင် သူတို့အသီးသီး ပြုခဲ့ကြသော အကျိုးပေး အားလျော်စွာ ကွဲပြားခြားနား ကြသော်လည်း နိဗ္ဗာန်သို့ ၀င်စံတော်မူကြသည့် အခါတွင်ကား တူညီသော တခုတည်းသော အသင်္ခတဓာတ်သို့သာ သက်ရောက်ကြသဖြင့် စိန်ဖူးတော်ကို တစ်ဆူတည်း ထားခြင်းဖြစ်လေသည်။၁၄. အထက်ပါအချက်များနဲ့ ပြည့်စုံပါက ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ နည်းစနစ်ဖြင့် မဟာ သတိပဌာန သုတ္တန် ရဲ့ စံချိန်စံညွှန်းများနဲ့ ဆောက်လုပ် တည်ထား ကိုးကွယ်သော စေတီဖြစ်ပြီး စေတီ တည်ရခြင်း အကြောင်း အနှစ်တရား များကို သိရှိပြီး ကြည်ညို ပူဇော်ပါက အဖိုးမဖြတ် နိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးတရားများ ခံစားကြ ရမည် ဖြစ်လေသည်။ သို့သော် အထက်ပါ အချက်များနဲ့ မပြည့်စုံသော စေတီဖြစ်ပါက ဓာတ်ရိုက် ဓာတ် ဆင်၊ ယတြာ၊ အထက်လမ်း၊ အစီအရင်များနဲ့ တည်ထားသော စေတီ မျှသာ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိ နိုင်ပါသည်။ ထိုစေတီ များကို ဖူးမြော်ပါက စီရင်သူရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ဖူးမြော်သူရဲ့ စိတ်စေတနာ အလိုက်သာ အကျိုး ပေးမည်ဟု မှတ်ယူ နိုင်မည် ထင်ပါသည်။ထို့ပြင် ဘုရားများတွင် တွေ့ရလေ့ရှိသော တိုင်ထိပ်တွင် ဟင်္သာနားနေဟန် တံခွန်တိုင်အကြောင်းကိုလည်း ရှာရှာဖွေဖွေ သိလိုက်ရသည်။ မာနတံခွန်တက်နေသူများ ဘုရားထံမှောက် ရောက်လိုလျှင် မာနကို အရင်ချ ခဲ့ရန် သတိပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ရှေးခေတ်က ဘုရားသို့ လာသူများသည် တံခွန်တိုင်ကို မြင်သည့်အရပ်မှ စတင် ကာ မာနချသည့်အနေဖြင့်ရော အရိုအသေ ပေးသည့် အနေဖြင့်ပါ ဖိနပ်ချွတ်ခဲ့လေ့ရှိကြောင်း၊ မာနခံနေပါက တရားမရနိုင်ကြောင်း၊ မာနစွဲကြီးသူသည် သက္ကာယဒိဌိခေါ် ငါစွဲကြီးသော သူများ ဖြစ်သောကြောင့် ငါစွဲ ပေါ်တွင်သာ မာနတက်လို့ ရသောကြောင့် မာနကြီးသူသည် တရားရဖို့ ခဲယဉ်းကြောင်း၊ ယင်းမာနကို ဘုရားပေါ်မရောက်ခင် အဝေးကတည်းက သတိပေးသည့် အနေဖြင့် တံခွန်တိုင်ကို မြင့်မြင့် တည်ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရလေသည်။ထိုမျှမကသေးပါ.. စေတီတော်မှ ညွှန်ပြသော သင်္ကေတများမှ ဟောပြောနေသော တရားတော်များကို ဆင်ခြင် နှလုံးသွင်း နိုင်ပါက ပါရမီ ရင့်သန်သူ ဖြစ်ပါက ဘုရားဖူးရင်းပင် နိဗ္ဗာန်ရနိုင်ကြောင်း ဆရာတော်က ဆက်ဟောပါသည်။ ဖြစ်နိုင်လောက်ပါသည်။ ဒါကြောင့်လည်းဘုရားသို့မှန်း ခြေတလှမ်း သိန်းသန်းမကထိုက်လှူသူ၊ ဖူးသူ၊ ပေးဝေသူ နတ်လူ ဘုံသို့ဆိုက် ဟု လင်္ကာလေး ထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်တန်ရာပါသည်။သည်လောက်တောင် စေတီရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုချင်းစီ အတွက်ရော အားလုံးခြုံငုံပြီးပါ အနှစ်ပါပါ အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ ပုံသဏ္ဍာန်များကို ရွေးချယ်စီစဉ်နိုင်သော ရှေးမြန်မာကြီးများရဲ့ သင်္ကေတ ၀ါဒကို အံ့သြချီးကျူးလို့ မဆုံးနိုင်တော့ပါချေ။ ထို အဟောင်းများရဲ့ အနှစ်များကို မသိပါဘဲ လျက်ဖြစ်စေ၊ သိလျက်နဲ့ ဖြစ်စေ ငါက အသစ်ထွင်တယ် ဆိုသော စကားကို လက်ကိုင်ပြုပြီး အဟောင်းကို ဖျက်ဆီးကာ အသစ်ထွင်ခြင်း၊ အဟောင်းနဲ့ အသစ်ကို ရောခြင်းများကို ပညာမဲ့ပီပီ ပြုလုပ်နေကြသူ တချို့ကို တွေ့တိုင်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါသည်။ သူတို့စိတ်ထဲတွင်တော့ သမိုင်းတွင် ငါ့ထက်တော်သူမရှိစေရ၊ ငါက သမိုင်းကို ဖျောက်ချင်သလို၊ ပြင်ချင်သလို ပြင်နိုင်သည်ဟု တလွဲမာနရှိဟန်တူလေသည်။ ပညာရှင်တို့ စိတ်ထဲတွင်တော့ အ၀ီစိကျမည့် သမိုင်းတရားခံများ ဟု သာ သတ်မှတ်ကာ သနားလေမည်။ အဟောင်းရဲ့ အနှစ်သာရ ကို အရင်လေ့လာပြီး အဟောင်းရဲ့ အနှစ်သာရ ထက်သာသော အသစ်ကို ထွင်နိုင်ပါမှ တိုးတက်ခြင်း အစစ် အဖြစ်ကြီး ဖြစ်ပေမည်။ သို့မဟုတ်ပဲ အသစ်ဖြစ် ပြီးရော လျှောက်လုပ်လျှင်ကား အသုံးမကျ လှသော အစုတ်ပလုတ်များနှင့် သည်လို လျှောက်လုပ်ရင် အစုတ်ပလုတ်တွေ ဖြစ်ကုန်တတ်တယ် ဟု ဥပမာ ပြစရာများသာ ကျန်ခဲ့မည် ကိုလည်း သတိတရား ရလိုက်ပါသည်။ကျေနပ်သွားသော စိတ်ကို ပြန်လည် သတိထားရင်း တရားတော်ကို ဟောပြသော ဆရာတော်ကို လည်းကောင်း တရားဆုံးအောင် နာလိုက်ခွင့်ရသော မိမိရဲ့ ကုသိုလ်ကံကို ကျေးဇူးတင်လိုက်မိသည်။ ခုလို သူငယ်ချင်းများနဲ့ စာဖတ်သူ များကိုပါ ဝေငှခွင့်ရမှုကို ပိုလို့ပင် ကျေးဇူး တင်မိသည်။ ကျွန်မ အတွက် ကတော့ သည်နေ့ကစပြီး ဘုရားကို အနှစ်ပါပါ နှလုံးသားနှင့် ဖူးတတ်ပါပြီ ဟုသာ ပြောချင်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာလူမျိုး စာဖတ်သူ များလည်း သိပြီးသား ဆိုလျှင်ဖြင့် အဖော်ရသည်မို့ ၀မ်းသာစွာ လက်ဆင့်ကမ်း ကြိုဆိုလိုက်ပါသည်။ မသိသေးသူများ ဘုရားကို နှလုံးသားဖြင့် အနှစ်ပါပါ အသိတရား အပြည့်ဖြင့် ဖူးမြော် နိုင်ကြအောင် သည်ဆောင်းပါးကို ရေးသား ဝေမျှရသော ကုသိုလ်ရဲ့ အဖို့ဘာဂ ကို စာဖတ် သူ ပရိသတ်ကို လည်း ကောင်း၊ သည်လို မြန်မာစာ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ သာသနာတို့ အဓွန့်ရှည် တည်တံ့ ကျန်ရစ်အောင် မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေ ပပျောက် မသွားအောင် ထိန်းသိမ်းခွင့်ကို အသက် ပေးကာ လွတ်လပ်ရေး အတွက် တိုက်ယူ ပေးခဲ့ကြသော အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီး ၉ဦး အပါအ၀င် အာဇာနည်များ အားလုံးကို လည်းကောင်း၊ ၃၁ဘုံတွင် ကျင်လည်ကုန်သော ဝေနယျ သတ္တ၀ါများ အားလုံးကို လည်းကောင်း အမျှ ပေးဝေပါသည်။ အမျှရပြီး နိဗ္ဗာန်သို့ မျက်မှောက်ပြု နိုင်ကြပါစေ။
( ရေးသားသူ=ခွန်မြလှိုင် ( http://www.ainmat.com/) ) မှ ကူးယူပါသည်။
Shwedagon Pagoda photo from http://en.wikipedia.org/wiki/Shwedagon_Pagoda
Anada Pagoda photo from http://www.myanmars.net/
Posted by ရွာသားလေး at 6:38 PM 1 comments Links to this post
အချစ် = သစ်ပင် ???????
Bio မှာသင်ရတဲ့ သားစားပင်တွေလိုရော လုပ်တတ်ပါသလား?
Posted by ရွာသားလေး at 7:18 PM6comments Links to this post
ခရီးသှားခွငျး ကနြျောအလှနျကွိုကျတဲ့ အလအေ့ထတဈခုပါပဲ။ မရောကျဘူးတဲ့ဒသေတှကေို အလညျသှားရတာ ပငျပနျးပငျမယျ့ ပြျောရှငျစရာမြားနှငျ့ နောကျတခေါကျသှားဖို. ဘယျတော့မှနောကျမတှနျ.ခဲ့။ ခရီးတှအေမွောကျအမွားသှားခဲ့ ဘူးပမေယျ့ အစီအစဉျတကြ သှားခဲ့တာမြားပါတယျ။ အဲဒီအထဲကမှ ဒီဂြုနျးဂြုနျးကြ ခရီးက မစီစဉျပါပဲ မတျောတဆ ကမှောကျကမှနိုငျလှစှာ ရောကျရှိသှားခဲ့တာပါ။
ကြောငျးအပွီး နယျအိမျကပွနျလာအပွီး အလုပျရှာမယျဆိုတဲ့ ရညျရှယျခကျြနဲ. ရနျကုနျကို ပွနျအလာမှာအိမျဘေးက အဒျေါလိုခငျတဲ့အနျတီတို.မိသားစု ကြိုကျထီးရိုးသှားမယျ့ ခရီးစဉျအကွောငျးကိုကွားရပါတယျ။ အလုပျမရသေးခငျ လိုကျခဲ့ဖို.ချေါတာကို ဖိုးလိုကျခငျြဖွဈနတေဲ့ကိုယျက ငွငျးမယျထငျလား။ ကားကညောငျတုနျးကကားနဲ.ပါ ကားပိုငျရှငျရယျ ညောငျတုနျးက ဧညျ့သညျနှဈယောကျရယျ ကားဆရာရဲ့တပညျ့တဈယောကျရယျ စကျပွငျဆရာ ကိုမိုးဇကျ (သူက ခရဈယာနျပါ) ပွီးတော့ ကနြျောတို.က ခွောကျယောကျပါ။ ကြိုကျထီးရိုးက ညမှာရောကျပငျမယျ့ မနကျမှတကျဖွဈပါတယျ။ တဈညအိပျမယျစီစဉျပငျမယျ့ လညျစရာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အကွောငျးပွခကျြနဲ. ပွနျဆငျးလာရပါတယျ။ သူမြားနဲ.သှားရတာဆိုတော့ စိတျသှားတိုငျးကိုယျဘယျပါနိုငျမှာလဲဗြာ။ ပွနျဆိုလဲပွနျတာပေါ့။ ကငျပှနျးစခနျးကပွနျထှကျလာခြိနျက ညနစောစားပွီးခြိနျပါ။ ထူးဆနျးတာက ကားဆရာက ညနစောကို ဥပုသျစောငျ့ပွီး ဘီယာသောကျလာတာ နှဈအတျောကွာပွီဆိုပဲ။ အတျောလညျးဟုတျတဲ့ဘီယာဗြ။
ပွနျလာတဲ့လမျးတဈလြှောကျပုံမှနျပဲဗြ။ ဒါပမေယျ့ ကြိုကျထိုလမျးခှဲကို လညျးဖွတျရော ကားဆရာရဲ့ညီမက ရုတျတရကျ ကြိုကျခမီကို သှားခငျြတယျဖွဈသှားပါရော။ ကားကိုခဏရပျပွီး တိုငျပငျကွ ဆှေးနှေးကွပေါ့။ အစတညျးက သူမြားနောကျလိုကျရပါတယျဆိုတော့ သူမြားဆုံးဖွတျတဲ့အတိုငျးပေါ့။နောကျဆုံးတော့ သှားခငျြတဲ့လူကအနိုငျရသှားတဲ့အနနေဲ.ကားကိုရောကျတဲ့နရောကနေ နောကျပွနျလှညျ့လိုကျကွပါတော့တယျ။ သှားခငျြပါတယျဆိုတဲ့လူက ခရီးကိုနီးနီးလေးနာရီပိုငျးနဲ.ရောကျမယျထငျခဲ့တယျဆိုတာနောငျမှသိလိုကျရတာပါပဲ။ ရကျတိုခရီးစဉျအနနေဲ. စီစဉျခဲ့တာဆိုတော့ အခုလိုခရီးရှညျမယျလို.မှမထငျခဲ့တာ။ ပြျောရှငျစှာပဲ ဘုရငျ့ညီဂူကို ဝငျလညျပါသေးတယျ တောငျပျေါမှာပိုကျဆံအိတျကနျြခဲ့ပါသေးတယျ။ ရပေူရအေေးလားဘယျနမေလဲဗြာ ခြိုးခဲ့သေးတာပေါ့။ ဘားအံကိုဖွတျ ဇှဲကပငျကိုငေးကွပါသေးတယျ။ ဝေးတယျဆိုပွီးမသှားကွတာ နို.မို.ဆို အဲဒီကို ရောကျအုံးမှာ။ သှားရငျလာရငျး မုဒုံနားအရောကျမှာတော့ တဈလမျးလုံးကောငျးလာတဲ့ကား စဖောကျပါတော့တယျ။ ညနမေမှောငျခငျလေးပါ။ ကားတဈကားရဲ့အကူအညီနဲ. မုဒုံက ဝပျရှော့ကို ရောကျလာရပါတယျ။ ကားလာပွငျတဲ့တဈခွားကားက အဖှဲ.အစညျးတဈခုရဲ့ကားပါ ကားပျေါမှာ ဆေးလိပျသောကျနကွေတာက ငယျရှယျအုံးမယျထငျပါတယျ လကျထဲမှာလညျး လကျနကျနဲ.ပါ။နညျးနညျးတော့ ရှိနျတာပေါ့ဗြာ။ ကားပွငျအပွီး ညစာစားထှကျစားကွပါတယျ။ ညစာစားအပွီး ထမငျးဆိုငျက ကနြျောတို.ကို ညဘကျခရီးမဆကျဖို.တားပါတယျ။ နယျမွကွေောငျ့ရယျ မကွာသေးခငျက မှ အဲဒီလမျးပျေါမှာ နာမညျကြျောမငျးသမီးကို ဓားပွတိုကျထားတာတဲ့ဗြ။ အဲဒါနဲ. ကနြျောတို.တညျးဖို.လိုကျရှာတော့ တညျးခိုခနျးမရှိဘူးတဲ့လေ။ မုဒုံကနျတျောကွီးက ဘုရားဝငျးထဲမှာတညျးဖို. ကြောငျးကိုလြှောကျတော့ ဆရာတျောက ကြောငျးဝငျးပွငျနတောမို. ဆရာတျောတို.ရဲ့စကွနျလြှောကျလမျးမှာပဲတညျးခှငျ့ပွုပါတယျ။ အမြိုးသမီးတှကေလညျးပါတာမို. ဟငျးလငျးပွငျမှာမဖွဈခဘြေူးဆိုပွီး လြှောကျရှာရပါတယျ။ ဆှမျးခံရငျးငှကျသငျ့တယျပဲပွောရမလား အဲဒီညက မုဒုံမှာ ဇာတျပှဲရှိလို. ဇာတျပှဲလာကွညျ့တဲ့ကိုရငျ နှဈပါးက သူတို.ကြောငျးမှတညျးလို.ရတယျလို.ပွောပါတယျ။ မသှားတတျတာမို. ကိုရငျနှဈပါးကို ပဲ လိုကျပို.ခိုငျးရပါတယျ။ တောထဲကိုတျောတျောသှားရတယျဗြ။ ကိုယျဟာကိုဆိုကြောငျးကိုရောကျမယျမထငျပါဘူးဗြာ။ ကြောငျးရောကျတော့ ဆရာတျောက မီးစကျနိုးပွီး အဖူးခံပါတယျ။ ဆရာတျောကိုလြှောကျပွီး တဈညတညျးဖို.လြှောကျတော့ ဆရာတျောက ကွညျဖွူစှာ ခှငျ့ပွုပါတယျ။ တောကြောငျးဆိုပမေယျ့ ရနျကုနျက ကြောငျးတိုကျလောကျတော့အသာလေးပါ။ ကြှနျးပါကေးခငျး နဂါးရုပျကြှနျးသားထိုငျခုံတှနေဲ. ခမျးနားလှတဲ့ကြောငျးပါ။ အသအေခြာစီစဉျပေးတာမို. ဗုဒ်ဓဘာသာတှရေဲ့ ကူညီမှုက တခွားနိုငျငံမှာရှာလို.တှေ.မယျမထငျ။ မနကျအိပျရာအထမှာတော့ မနကျစာစားဖို. ဟငျးခကျြကူတဲ့ အမကွေီးတှကေ အတငျးလာချေါကွပါတယျ။ ကောငျးမှနျလှတဲ့မနကျစာစားအပွီး လကျရှိကြောငျးထိုငျဆရာတျောရယျ နာမညျကြျောလှတဲ့ ဂြုနျးဂြုနျးကဆြရာတျောဘုရားကိုဦးခိုကျပွီး ခရီးဆကျခဲ့ကွပါတယျ။ နောကျမှသိရတာက အရမျးကိုလှတဲ့ ဂြုနျးဂြုနျးကရြတေံခှနျကို မရောကျဖွဈခဲ့တာပါ။ ရှိမှနျးလညျးမသိတာပါ။ နောကျတော့ ကြိုကျခမီ စကျစဲကို ရောကျအောငျသှားဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ငပလီကိုရောကျဖူးတဲ့ကနြော့အတှကျ စကျစဲကမျးခွကေ မဆှဲဆောငျနိုငျဘူးဖွဈနပေါတယျ။ အဲဒီနေ.မျောလမွိုငျပွနျရောကျတော့ ဖွတျစရာတံတားက ပိတျသှားပွီဖွဈတာမို. မျောလမွိုငျမှာ တဈညထပျအိပျရပွနျပါတယျ။ ဘတျဂကျြကအားလုံးကုနျနပွေီဖွဈတာမို. ထမငျးစားဖို.ရယျ ဆီဝယျဖို.အတှကျ ညောငျတုနျးက ဧညျ့သညျတဈယောကျရဲ့ ဆှဲကွိုးက မျောလမွိုငျမှာ နရေဈခဲ့ပါတော့တယျ။ နေောကျနေ.ရနျကုနျကိုတောကျလြှောကျမောငျးပငျမယျ့ အိမျကိုရောကျတော့ မနကျငါးနာရီထိုးနပေါပျွီ။ ၂ ရကျလို.စခဲ့တဲ့ခရီးက တကယျကို ၅ ရကျလောကျကွာခဲ့တာမို. ကနြော့ဘဝမှာ ကသောငျးကနငျးနိုငျလှတဲ့ ခရီးစဉျအမှတျ ၂ ဖွဈသှားပါတော့တယျ။ ပထမခရီးစဉျကတော့ အလောငျးတျောကသပ ခရီးစဉျပါပဲ။ နောကျနေ. တနေ.လုံးအိပျပွီးနိုးလာတော့ အိမျကကနြော့ကို လတျမှတျလေးတဈစောငျထုတျပွပါတယျ။ နောကျနေ.ည ၁၀နာရီမှာထှကျမယျ့ စိနျဝငျးနဲ.ရောငျးရငျးမြားရဲ့ ကြိုကျထီးရိုးဘုရားဖူးခရီးစဉျပါတဲ့။ ကနြော့ဆှမြေိုးမြားအလညျရောကျနတောမို.လိုကျပို.ပေးဖို.ပါတဲ့ဗြာ။ ပငျပနျးပါတယျဆိုပွီး ငွငျးခဲ့မယျထငျသလား………………………………………………
Posted by ရွာသားလေး at 11:20 PM3comments Links to this post
မိုးနဲ.အတူ ကျတဲ့ ပီတိမျက်ရည်
ဒီနေ.မနကျ ၅နာရီထဲက ထရပါတယျ။ လတှေလေညျးတအားတိုကျပါတယျ။အဲလောကျမိုးရှာလိမျ့မယျလို.လညျး ထငျမထားမိဘူးလေ။
အခနျးဖျောတဈယောကျကိုနိုးပွီးတကျသုတျရိုကျ လုပျကွရပါတယျ။ ဒီနေ. ကြေးဇူးတျောရှငျဖားအောကျတောရဆရာတျော ပွနျကွှမယျ့နေ.ပါ။ အဈမကွီးတှရေဲ့အကူအညီနဲ. သကျသကျလှတျအာရုဏျဆှမျးကပျဖို. ကနြျောစီစဉျထားတဲ့နေ.ပါ။ ကုသိုလျယူုဖို.သူငယျခငျြးတှကေို ချေါထားပငျမယျ့ (အနညျးအကဉျြးလောကျသာဖိတျခဲ့ပမေယျ့) ရှားရှားပါးပါးရုံးအားတဲ့ရကျမို. မလာနိုငျပါဆိုတဲ့သူငယျခငျြးတို.ကို မနကျစောစောထဖို.ကိုကိုယျမတိုကျတှနျးရကျခဲ့သလို မဖိတျဖွဈတဲ့သူငယျခငျြးတို.ကိုလဲ ဒီကနပေဲတောငျးပနျပါတယျဗြာ။
ဒီအလှူကို စီစဉျပေးတဲ့အဈမကွီးကပဲ ဆရာတျောကွီး ဘုနျးပေးမယျ့ ကွာဇံခကျြခကျြဖို.အကွံပွု လုပျဆောငျပေးပါတယျ။ ကွာဇံခကျြကို ဘုနျးကွီးရဲ့ကြောငျး ကို သယျပေးဖို.သာ ကနြျောတာဝနျယူပေးရပါတယျ။ (တကယျကို သယျပေးရုံလေးပါ) အိပျရေးပကျြခံ ပငျပနျးခံပွီး ကုသိုလျယူ ခကျြပွုတျပေးတဲ့ ကနြော့အဈမကွီးမြားကို တဈကယျကို ကြေးဇူးတငျဂုဏျပွုပါတယျ။ ကွာဇံခကျြသယျမယျ့နရောရောကျတော့ မိုးက သညျးသညျးမညျးမညျးကိုရှာနပေါပွီ။ အိုးတှတေဈဖကျ ထီးကတဈဖကျနဲ. Taxi ကို အပွေးအလှားငှားရပါတော့တယျ။
နရောရောကျတော့ ကွို တဲ့လူတှကေလညျး ကွာဇံခကျြကိုစောငျ့နတောဆိုတော့ သယျလာရတဲ့လူတှပေီတီဖွဈရပါတယျ။ ဆရာတျောကွှလာလို. အသီးသီးကပျဖှယျကပျရာတှကေို သူ.ထကျငှာ ကပျကွရပါတယျ။ ကနြျော ပီတိဖွဈရတဲ့အခြိနျကတော့ ကနြော့ ဒါန ကွာဇံခကျြဆှမျးကို ဆရာတျောကပထမ ဦးဆုံးကုနျသညျအထိ ဘုနျးပေးတဲ့အခြိနျပါပ။ဲ ဖားအောကျကို ဖွတျသှားဘူးပငျမယျ့ မရောကျဘူးတာရယျ (ဂြုနျးဂြုနျးကြ ကြောငျးမှာတော့ တဈညအိပျခဲ့ဘူးပါတယျ) ဆရာတျော မွိနျယှကျစှာဘုနျးပေးနတောရယျကွညျ့ကွညျညိုရငျးမိဘနှဈပါးကို စိတျထဲက သတိရမိပါတယျ။ မိဘနှဈပါးနဲ.အတူ ကုံလုံကြောငျးမှာ အာရုဏျဆှမျးကပျခဲ့တာကိုလညျးတှေးရငျး ပါးနှဈဖကျစိုလာတာကို သတိထားမိပါတယျ။ ကနြျောငိုနမေိပါလား အလှူက ရတဲ့ပီတိရယျ မိဘနှဈပါးကို အနားမှာရှိခငျြစိတျရယျ လှိုကျတကျလာတဲ့ကနြော့ခံစားမှုဟာမကျြရညျအဖွဈနဲ.အပွငျကမိုးတှနေဲ.အပွိုငျရှာနမေိပါတယျ။ ကံကောငျးတာက ကနြျောရှေ.ဆုံးမှာထိုငျနမေိတာဆိုတော့ ကနြော့မကျြရညျတှကေို ဘယျသူမှ သတိထားမိမယျမထငျပါဘူး။ ဆရာတျောဘုနျးပေးပွီးတော့လညျးဆရာတျောရဲ့သပိတျကို ဆေးခငျြလို.အပွေးအလှားလိုကျရပါတယျ။ ရနှေေးနဲ.ဆေးပေးတဲ့အခှငျ့အရေးကုသိုလျကို ကနြျောရလိုကျပါတယျ။ ကနြော့ရဲ့ ရှိရှိသမြှသောမိတျဆှအေပေါငျးအသငျး တှကေို ကနြျောဒီနေ. ရသမြှ ကုသိုလျတှေ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။ အားလုံးကနြျောနဲ.အတူ တပျတူထပျမြှ အပွညျ့အဝရကွပါစဗြော…………….
Posted by ရွာသားလေး at 1:32 PM4comments Links to this post
ဒီခေတ်ကြီးကိုက ပညာခေတ်ကိုးဗျ။ နေရာတိုင်းမှာ အသိပညာ အတတ်ပညာ တွေ အပြိုင်အရိုင်းတိုးတက်နေကြလို.ပါ။ တောကလာတဲ့ ကိုယ်လို လူတစ်ယောက်အတွက်ကော နောက်ထပ်လာမယ့်လူတွေအတွက်ကော စိတ်မအေးဖြစ်ရပါတယ်။နဂိုကမှ အသိပညာ အတတ်ပညာချို.တဲ့ရတဲ့ ကြားထဲ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းပန်းကလည်းမကောင်းပြန်ဆိုတော့ လူဖြစ်ရှုံးတယ်ပဲပြောရမှာပေါ့ဗျာ..
ကျနော်အခုရောက်နေတဲ့နေရာအထိ နောက်ပြန်ကြည့်မိတာလေးပါ။ ဆိုလိုတာက ရွာကကျနော်နဲ. အခု ကျနော်ကို ယှဉ်ကြည့်မိတယ်ပဲ ပြောကြပါစို.။ ကျနော်တို.တောမှာက ဖုန်းဆိုတာရှားမှရှား အခုပြောနေတဲ့ mobileဆိုတာ မြင်ဖူးဖို.ဝေးစွခြောက်ဖြာ။ ဖုံးဆက်ချင်ရင်အစိမ်းကိုနှိပ် ဖုံးပိတ်ချင်ရင်အနီကိုနှိပ်ဆိုပြီး မှတ်ထားလိုက်တယ်အေးရော။ message ပို.ခိုင်းမယ်လား ဘာလုပ်လို.ဘာကိုင်ရမှန်းကိုမသိတာ။ ရိုးချက်တော့ လို.ပြောကြအုံးမလား။ ရုပ်မြင်သံကြားဆိုတာ တစ်ရပ်ကွက်မှတစ်လုံးထားပေးထားလို.သာ တိုးဝှေ.ကြည့်ရပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်ဝယ်ဖို. ဘယ်စိတ်ကူးရဲမှာလဲဗျာ။ ကွန်ပြူတာဆိုတာကရော ကျောင်းကအလှူခံလို.သာထည့်လိုက်ရတယ် မှန်ပေါင်းချောင်ထဲက ရွှေငါးလေးလို အလှကြည့်ယုံသက်သက်ပါ။ အဲဒီတော့ဗျာ ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးရဲ့ပါဝင်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေအသုံးချပုံတွေ ကိုမလေ့လာခင် power ခလုတ်ကဘယ်နားမှာ keyboard ပေါ်ကခလုတ်တွေကို သိဖို.အရင်ကြိုးစားနေရတာကအရင်ဆိုတော့ တွေးသာကြည့်ကြပါတော့ဗျာ။ဒီလိုတရွတ်တိုက်လိုက်နေရတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို software တွေနဲ. နပန်းလုံးခိုင်းရင်တရားပါ့မလားဗျာ။ တရုတ်ကားထဲကလို မည်သို.လုပ်လိုက်သည်မသိက ခပ်များများရယ်ပါ။ နောက်ပြီးတော့ အားလုံးကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ နပ်ဝပ်ဆိုလားပါဆိုလားဗျာ သူတို.ပြောတာက ဘယ် Drive ထဲမှာ ဘာရှိတယ်ယူလိုက်ပါတဲ့ ကိုယ်ကတော့ အဲဒီ Drive ဆိုတာကြီး ကိုဘယ်လို ရှာရမလဲ ပေါ့ ခေါင်းကိုကုတ်နေရုံနဲ.ထွက်မလာဘူးဆိုတာသိပါတယ် ဒါပေမယ့်ကုတ်နေမိတာပါပဲ။ ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ ရွာမှတစ်လုံးမှမရှိဘူးတဲ့ copier, scanner, printer, fax4in 1 ဆိုတာပါပဲ ဘယ်လိုနှိပ်ရမလဲ စက်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်နေတုန်း သူများတွေက screen လေးကိုပဲနှိပ်နှိပ်သွားကြတယ်ဗျ။ ထူးဆန်းပ။ Email ပို.ပို.ဆိုတော့ လည်း address ရိုက်ဖို. Attachment တွဲဖို.ဆိုတာ ပုစ္ဆာ ခက်ခက်ကြီးတွေပါဗျာ။ BCC နဲ.ပို.ဆိုတော့လည်း ကျီးကြည့်ကြောင်ကြည့် ကြည့်နေမိပြန်ရော ရွာမှာ Internet ဆိုတာမကြားဖူးပါ။ ဒီအကြောင်းအရာတွေက အစိမ်းဆိုမှ အစိမ်း။ တစ်ခြား Digital အသုံးအဆောင်တွေက လည်းလွတ်များတာကိုး။ လုပ်ငန်းသဘောကိုလည်းလေ့လာရ မိခင်ဘာသာမဟုတ်တဲ့ ဘာသာ ကို ပုံစုံအမျိုးမျိုး အသံထွက်အမျိုးမျိုးနဲ. ပြောနေကြတာကို နားရေလည်အောင်လုပ်ရ နဲ. ဗေဒါလေးကျနော့ဘ၀က ဘဲအုပ်တစ်ရာနှစ်ရာကြားထဲမှာပါ။
အဲဒီလိုကြုံရတိုင်း Theroey ကိုသာလေ့လာခဲ့ရပြီး (Theroey ကလည်း generalပါ) လက်တွေ.နည်းခဲ့ ရတဲ့ ကျနော့ဘ၀ နောက်ကျကျန်ခဲ့တဲ့ အသိပညာ အတတ်ပညာ (အခုထိလည်းနောက်ကျဆဲ) ဆင်းရဲပါတယ်ဆိုတဲ့ ကျနော့ ရွာကလူတွေနောက်ထပ်များလာကြမယ်ဆိုရင် ကျနော့လို.မခံစားစေချင်လို.ပါဗျာ………..
ဒီစာလေးကို Siemensရဲ့ Training သင်တန်းချိန်မှာ ခံစားရေးခဲ့တာပါ
၁၆. ၀၆. ၂၀၀၈
Posted by ရွာသားလေး at 3:06 PM3comments Links to this post
Posted by ရွာသားလေး at 11:52 PM2comments Links to this post
Posted by ရွာသားလေး at 10:45 PM3comments Links to this post
Posted by ရွာသားလေး at 8:02 PM3comments Links to this post
ကျနော် ရထား ဘုရားပွဲ
ပထမဆုံးအဖလေိုကျပို.တဲ့ ဘုရားပှဲပါ။ မကှေးမွသလှနျဘုရားပှဲပေါ. သူ.အရပျမှာတော့ စညျကားတာပေါ့ဗြာ။ ဝနျထမျးမိသားစုဘဝမှာ ခရီးတဈခုထှကျဖို.ဆိုတာ ခကျခဲလှနျးလို. ပိုကျဆံကိုတှကျမနကျဖွနျအတှကျခနျြ သားသမီး ပညာရေးကလညျးရှိပွနျဆိုတော့ ဘယျလောကျအနကေပျြလိုကျမလဲဗြာ။ အဲဒီကွားကမှ လိုကျပို.တဲ့ပှဲပါ။တဈပှဲဆိုတဈပှဲ မှတျလောကျသားလောကျပါပတေယျ။
လူတှကေလညျးမြား စြေးဆိုငျတနျးတှကေလညျး မွဈကမျးပါးတဈလြှောကျဘုရားမရောကျခငျအထိ တဈမြှျောတဈချေါ တောသားလေးတဈယောကျတော့ အဖနေဲ.အမလေကျကိုကဈြကဈြပါအောငျဆှဲ (လူကလညျးကွောကျ၊ ကှဲသှားမှာလညျးစိုး) ဘေးဘီကိုလညျးမလပျရအောငျငေးပွီးလိုကျလာတာပေါ့။
တဈနရော ဆိုငျတမျးလေးမှာ ပါ သံလမျးအမဲရောငျလေးမှာ ရထားလေးတဈစငျးသှားနတေဲ့မွငျကှငျးက ကနြော့ခွလှေမျးတှကေို ရုပျသိမျးလိုကျပါတယျ။ တကယျတော့ အဲဒီအခြိနျထိ ရထားဆိုတာဘာမှနျးမသိ စီးဖူးဖို.ဆို ဝလောဝေး။ ခေါငျးတှဲလေးနောကျမှာ တနျးစီပွီးတော့ လိုကျနကွေတယျဗြ။ မွောငျးဖျောထားတဲ့ လမျးလေး ဘဲဥပုံလမျးလေးပါ ကနေ ပွုတျမကအြောငျမောငျးနလေိုကျတာ စိတျဝငျစားစရာကောငျးပါဘိတော့။ ခေါငျးတှဲလေးရဲ့ခွထေောကျနားမှာလညျး သံခြောငျးလေးနှဈခြောငျးကရှေ.တိုးနောကျငငျလုပျနတော ကွညျ့လို.မဝနိုငျစရာ။ စားပှဲကိုကိုငျပွီးငေးနလေိုကျတာ ချေါလို.ကိုမရတော့ဘူး။ ဝယျမပေးရငျမရဘူးဆိုပွီးခုံကိုငျပွီးငိုတာဗြ။ စြေးသညျအကှကျပဲ အဖအေမမေကျြဖွူဆိုကျတော့ စြေးသညျစိတျကွိုကျပဲပေါ့။ ချေါတဲ့စြေးပေးရငျပေး မပေးရငျမရောငျးဘူးတဲ့။ ဆိုးလိုကျတဲ့ကလေးကလညျး ဒါဆိုမှဒါ ခုဆိုမှခု (ခုခြိနျထိအဲဒီအတိုငျး)။ နောကျဆုံးရှကျရှာတယျထငျပါတယျ မိဘနှဈပါးမှာ နောငျခါလာနောငျခါစြေး ရှေ.ရေးနောကျရေးမေ့ ထားပွီး ဖွဈနတေဲ့ ပွသနာမွနျမွနျပွီးအောငျဝယျပေးလိုကျရတာပေါ့ဗြာ။
အခုခြိနျထိ ပကျြစီးနလေောကျပွီဖွဈပမေယျ့ သိမျးထားဆဲရထားလေးက အဖနေဲ.အမရေဲ့လိုအပျခကျြတှကေို သားတဈယောကျအနနေဲ. ပွနျလညျပေးဆပျနိုငျပွီလားလို.မေးလာခဲ့ရငျ ရထားလေးရေ ခုံကိုငျပွီးပွနျငိုပွ မှာနျော မမေးနဲ.
Posted by ရွာသားလေး at 9:20 PM3comments Links to this post
Posted by ရွာသားလေး at 1:35 AM3comments Links to this post
အမအေ့ကွောငျးကိုတစတေ့စောငျးဖျောပွပွီးတဲ့ နောကျမှာ အဖအေကွောငျးလညျးဖျောပွဖို.လိုအပျမယျထငျပါတယျ။ ခလေးဘဝထဲမှာ နူးညံ့တဲ့ အသိဉာဏျထဲကို လိုရာပုံသှငျးဖို. ကွိုးစားခဲ့တဲ့ အဖပေါ။ အလုပျတဈဖကျနဲ.စာတှဘေယျအခြိနျဖတျလဲမသိပငျမယျ့ အဖရေဲ့ပုံပွငျတှကေ တညနဲ.တညမထပျခဲ့ပါဘူး။ ကိုယျတိုငျအလုပျထဲဝငျရမှ အလုပျရဲ့ပငျပနျးဆငျးရဲမှုတှေ၊ လူတှရေဲ့အမြိုးမြိုးသော စိတျဒုက်ခပေးမှုတှေ ကွားမှာ နှဈရှညျလမြား လုပျကိုငျနိုငျတဲ့ အဖရေဲ့ရပျတညျမှုကို အံ့သွဘနနျးဖွဈရသလို အဲဒီကွားထဲမှာ ကလေးတဈယောကျကို စိတျရှညျလကျရှညျပုံပွောပွတတျတဲ့ အဖကေို့ လေးစားကွညျညိုမဆုံးဖွဈရပါတယျ။
အမရေဲ့ တဈပုဒျထဲသောပုံပွငျက လောဘမရှိတဲ့သူရယျ၊ ဒေါသမရှိတဲ့သူရယျ၊ မောဟမရှိတဲ့သူရယျဆိုတာပါပဲ။ အခုခြိနျထိလညျး သူအပိုငျဆုံး ပုံပွငျတဈပုဒျအဖွဈရပျတညျဆဲပေါ့။
ကနြော့အဖကေတော့ ငါးရာ့ငါးဆယျဇာတျနိပါတျတှေ၊ ဘုရားအလောငျးပုံတှေ၊ နိုငျငံတကာပုံပွငျတှေ တိုငျးရငျးသားရိုးရာပုံပွငျတှနေဲ. ပငျြးသှားရတယျဆိုတာ မရှိစရေပါဘူး။ ပုံပွငျတှနေဲ. ကွီးပွငျးခဲ့ရတဲ့ ကနြော့အတှကျ စာပကေိုခဈြမွတျနိုးတတျတယျဆိုတာ ဆနျးမယျမထငျပါဘူး။ မှတျသားနာယူထိုကျတာကို
နာယူဖို. အတုယူသငျ့တာကို အတုယူဖို. စံထားဖို.စတာတှကေတော့ အဖရေဲ့ အဆုံးသတျနိဂုံးခြုပျမြားပါပဲ။ အဖအေိမျမှာကပျထားတဲ့ဆောငျပုဒျကလညျး “စိတျထားကောငျးဖို.ပထမ” တဲ့။
ဖြားနာနတေိုငျးမှာ ကနြော့ကိုခြှေးသုတျဖို. အဖြားတိုငျးဖို.ဘယျတော့မှတာဝနျမပကျြခဲ့။ ညတိုငျး အမွဲအအိပျကွီးတဲ့ အမနေဲ.ကနြော့ကို တံခါးပိတျပေးဖို. စောငျခွုံပေးဖို.လညျးမလဈလပျခဲ့။
လူတကာကိုကူညီတတျတာတှေ စကားနဲတာတှေ အလုပျအကိုငျတိကတြာ စစေ့ပျတာ အဖမှေ့ာ အလုပျနဲ.ပတျသတျလို. နေ.စဉျမှတျတမျးလေးထားရှိတာတှေ လောဘနညျးတာတှေ စညျးကမျးကွီးတာတှေ အမကေို့စိတျရှညျတာတှေ က တော့ ကနြျောဘယျတော့မှ လိုကျမမှီတဲ့ အရာတှပေါ။
တောကနမွေို.ကိုကြောငျးသှားတကျမယျဆိုတော့ အဖပွေောလိုကျတဲ့စကားလေးက “ငါ့သားတဲ့ လိုတာကိုမှာပါတဲ့ ဒါပမေယျ့အသုံးကိုအဖွုနျးမဖွဈစနေဲ.တဲ့” အဲလိုမြိုးထိထိရောကျရောကျကိုပွောလိုကျတာ။ တကယျကို ကနြျောပိုကျဆံမှာတိုငျး မညီးမညူ ပို.ပေးခဲ့ပါတယျ။
ကြောငျးပွီးတော့လညျးကနြော့ပုခုံးကိုဖတျပွီး “ငါ့သားကွီးအောငျမွငျပါစကှောတဲ့” အဲဒီစကားတဈခှနျးထဲနဲ.တငျ ခှနျအားတှအေမြားကွီးဖွဈစခေဲ့ပါတယျ။
ရပျဝမွေခွေားရောကျပွနျတော့ အဖဘောမှာမလဲဆိုတော့ “ကနျြးမာရေးဂရုစိုကျပါကှာတဲ့” ။ ကဲ ကနြော့အဖကေအဲလိုဗြ ဒီနေ.တော့ အဖမြေားနေ.ပီပီ အဖကေို့သတိတရနဲ. တခှနျးလောကျပွောခငျြတာက “ အဖကေနြော့ကို အရငျတုနျးကလိုပုံပွငျပွောပွ……”လို.ပါ………………..
အဖနေကေောငျးဖို. စိတျခမျြးသာဖို. အဖနေခေငျြတဲ့အေးခမျြးတဲ့ဘဝလေးကိုပိုငျဆိုငျနိုငျဖို. ဆုတောငျးပေးပါတယျအဖေ…….
Posted by ရွာသားလေး at 12:24 AM5comments Links to this post
Posted by ရွာသားလေး at 11:22 PM4comments Links to this post
မနေ.ညက ဗြုန်းကနဲမိုးတွေရွာချ ရာကနေ ကျနော့ရဲ့ လသာဆောင်ရောဂါပြန်ထလာပါတော့တယ်။မိုးတွေရွာနေတာကို ပြတင်းပေါက်ကကြည့်ရင်း တကယ်ကို စိတ်ထဲက အပြင်းအထန်လိုချင်မိပါတော့တယ်။လသာဆောင်ရောဂါဆိုတာ…..
နွေဆိုရင် စာမေးပွဲတွေ ဖြေအပြီးပေါ့ ကျနော်တို.ဆွေမျိုးတွေ အဖိုးအဖွားရှိရာဇာတိမြို.ကိုပြန်ကြပါတယ်။ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က မိသားစုတွေပြန်လည်ဆုံတွေ.ကြမြဲ။ နှစ်ထပ်ရှိတဲ့အိမ်ကြီးမှာ ကျနော်တို.သားအမိနှစ်ယောက် အမြဲနေရာယူတတ်ကြတာက အပေါ်ထပ်က လသာဆောင်ပဲပေါ့။ ပူအိုက်တဲ့ရာသီဥတုမှာ သွပ်မိုးလသာဆောင်လေးက အသင့်တော်ဆုံးပါ။ အောက်ကသစ်တွေကိုလည်းအပြည့်မခင်းထားတော့ လေ၀င်လေထွက် အတွက်ပြောစရာမလိုတော့။ နောက်တစ်ခုက အောက်ကထမင်းစားခန်းနဲ. ကပ်လျက် သရက်ပင်ကြီး ဆီက ပန်းနံ. ၀ါဆိုသရက်ဖြစ်တာမို. အဲဒီအချိန်ဆို အပွင့်တချို.အသီးတချို.မြင်နေရပြီလေ။
တဖြုတ်ဖြုတ်ရောက်လာတဲ့ ဆွေမျိုးတွေရဲ့ တနှစ်တာမိမိမြို.ရွာက အဖြစ်အပျက်များ၊ လာတဲ့ လမ်းမှာ ကြုံရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ကို မမောနိုင်မပမ်းနိုင် တစ်ယောက်အနားတစ်ယောက်အကြားနဲ. ပြောကြမြဲ မနက်၁နာရီ ၂နာရီရောက်သည်အထိကို ရီကြ မောကြမို. အိမ်နီး နားချင်းတွေပါ တရေးနိုး ပါဝင် ဆင်နွှဲနေကြ။အဲဒီက စကြိုက်သွားတယ်ထင်တယ်…
ကျနော်ဆုံးဖြတ်မိတာက ငါနေမယ့်အိမ်မှာလသာဆောင်ရှိကိုရှိရမယ်ပေါ့။ အဲဒီနေရာမှာကျနော် အိပ်ချင်လည်းအိပ်မယ်၊ ဂစ်တာတီးပြီး သီချင်းဆိုချင်လည်းဆိုမယ် (တကယ်က လုံးဝမတီးတတ်ပါ) လသာဆောင်မှာ အပေါက်လေးတွေရှိရင် ခြေထောက်နှစ်ချောင်းတွဲလောင်းချပြီးတွေးပစ်လိုက်မယ်ပေါ့..
ဒါပေမယ့်ဗျာ အဖိုးအဖွားအိမ်ကလွဲပြီး နောက်ပိုင်းနေရသမျှအိမ်တွေအားလုံး လသာဆောင်ဆိုတာ မပါဘူးဗျာ။ ကျနော်လသာဆောင်လိုချင်တယ် လသာဆောင်ပါတဲ့အိမ်လေး မှာနေပါရစေ……
Posted by ရွာသားလေး at 9:39 PM2comments Links to this post
ဘေးရန်ကင်းဖို. ခါးပတ် ပတ်ကြစို.
Forward mail ကနေရတာပါ ပြုံးပျော်ရင်း အသိပညာရမယ်ထင်ပါတယ်........
Posted by ရွာသားလေး at 11:56 PM 1 comments Links to this post
အမြင့်မှာရှိနေသလို အနိမ့်မှာလဲ မင်းရှိပြန်တယ်
Posted by ရွာသားလေး at 9:44 PM2comments Links to this post
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ စကားချိုတွေ စီးဆင်စေခဲ့သလား
Posted by ရွာသားလေး at 8:08 PM3comments Links to this post
သုံးလုံးထဲ နဲ.တော်တော်တာသွားတယ်ဗျာ။ နားလည်မှုဆိုတာဘာလဲကြိုးစားရင်းနားမလည်နိုင်အောင်ကို ဖြစ်ရပါတယ်။ ဘာလဲနားလည်မှုဆိုတာ………
မိဘနဲ.သားသမီးကြား မိဘဖြစ်စေချင်တာနဲ. သားသမီးဖြစ်ချင်တာ၊ အသက်အရွယ်အရရော ခေတ်ကာလမတူညီမှုအရရော နားလည်မှုရဖို.ခက်ခဲ၊
ဆရာနဲ. တပည့်တွေ ဖြစ်စေချင်တဲ့ စေတနာ မဖြစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေရတဲ့ ဘ၀တွေ ထပ်တူကျမယ်ထင်သလား
သမီးရီးစားများကြား ဂရုစိုက်ခံချင်တာရယ် မနာလိုဝန်တိုတာရယ် လွတ်လပ်မှုကိုနှစ်သက်တာရယ်တကယ်ကိုအခက်အခဲတွေ
အိမ်ထောင်ဖက်များကြား အမျိုးသားတွေရဲ့ ၀ါသနာ စိတ်ဓာတ် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အမူအကျင့် အပြောအဆို နားလည်ဖို.လွယ်မယ်ထင်သလား
အလုပ်ရှင်နဲ.အလုပ်သမားကြား အမြတ်အစွန်းနဲ.တိုင်းတာသူနဲ. အလုပ်ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ကိုင်နေသူများဆုံနိုင်မယ်တဲ့လား
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကြား တာဝန်ယူမှု အပြိုင်အဆိုင် ယှဉ်ပြိုင်မှုများသာ
သူငယ်ချင်းတွေကြား ကိုယ်လိုချင်တာပဲသိတာနဲ. (ကျနော်လိုလူမျိုးပါ) အနစ်နာခံမှု ထာဝရ တွဲနေမှာလား
အခန်းဖော်တွေကြား အေးအေးချမ်းချမ်းနေချင်တာနဲ. မသိတတ်တာ မြဲနေမှာတဲ့လား
ကျနော်စဉ်းစားမိတယ်ဗျာ ကျနော်တို.တွေရဲ့ ကြားမှာ အဲဒီစကားလုံးက ပြတိုက်တခုကတန်ဖိုးကြီးအရာလိုပဲ။ မြင်ပဲမြင်နေရတယ် တကယ်မသုံးရ မထိရ မကိုင်ရ။
Posted by ရွာသားလေး at 8:32 PM 1 comments Links to this post
တစ်ချက်လောက်ဖြစ်ဖြစ်မော့ကြည့်လိုက်ပါ။ ကောင်းကင်တစ်ခုအသေအချာတွေ.ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကောင်းကင်ခြင်းတူချင်မှတူပါလိမ့်မယ်။ အောက်အရပ်နဲ. ရှမ်းပြည်က ကောင်းကင် တူတူပင်မယ့် အဆင်ကွဲနေပါတယ်။ ကောင်းကင်ကြီးဘာကြောင့်ပြာဆိုတာတော့ သိမယ်ထင်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ရာသီဥတု ကို လိုက်ပြီး အရောင်အသွေး ခြားနာစေသလားပဲ။ ထုံးစံအတိုင်းသေသေချာချာ မသိတတ်တဲ့ ကျနော့အတွက်ကောင်းကင်ဆိုတာ…..
ကျနော့ဘ၀က ဟိုးအစွန်အဖျားကစခဲ့ရပါတယ်။ ၁၀တန်းတက်ဖို.မြို.ကအဒေါ်တွေ အိမ်မှာနေခဲ့ရတယ်။ ၁၀တန်းပြီးရင်ကျောင်းပြီးပြီလို.သတ်မှတ်တဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ဘာအကြောင်းကြောင့်မှ အင်ဂျင်နီယာဖြစ်လာစရာမရှိ။ ရွာပြန်ပြီးငါးဖမ်းလှေလိုက်မယ်ဆိုကာမှ ဂုဏ်ထူးနှစ်ခုနဲ.အောင်ပါသတဲ့။ အဒေါ်ကလည်းခိုင်းကောင်းလို.လားပဲ မြို.မှာကျောင်းတက်ဖို.ပြန်ခေါ်ခဲ့တယ်။ ကလေး ၂ ယောက်နဲ.ဗျာများနေတဲ့ အဒေါ်ကိုကူဖို.ရယ် ကျောင်းပြန်တက်ဖို.ရယ် မြို.ကိုပြန်ရောက်ခဲ့ရတယ်။
၂ နှစ်ကျောင်းတက်အပြီးမှာတော့ ကျောင်းကအစ်ကိုကြီးတွေက ရန်ကုန်မှာသွားတက်ဖို.အကြံပေးကြတယ်။ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဗျာ မြို.ငယ်လေးကကျောင်းဆိုတာတောင် ကိုယ့်အတွက်အနိုင်နိုင်ရယ်။ ဒါပေမယ့်ဗျာ အတန်းထဲမှာ ၂ယောက်ထဲသာရှိတဲ့ကျောင်းမို. ကျနော်တို.ပြည်နယ်က မြို.တော်မှာ တက်ဖို.စာထွက်လာတယ်။ မကြာခင်မှာကျောင်းပြီးမှာပဲ ဆိုပြီး အမျိုးတွေ ခြစ်ခြုပ်ပေးတဲ့ ပိုက်ဆံထုပ်နဲ. လာခဲ့ရတယ် ။ ကျောင်း၂နှစ်ပြီးပြန်တော့ ကံဆိုးကံကောင်းလားပဲ ၀န်ထမ်းအစ်ကိုက ရန်ကုန်မှာတာဝန်ကျခဲ့သလို ကျနော် ကလည်းဘွဲ.ရတဲ့အထိနောက်ထပ် ကျောင်းတက်ခွင့်ရရှိပြန်ပါတယ်။
ကျောင်းပြီးလို. အလုပ်ရပါမလားလို.စိုးရိမ်စိတ်နဲ. ရှာဖွေရပြန်တယ် နာမည်ကြီးတဲ့ company တစ်ခုက ကျနော့ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဗျာ အချုပ်အနှောင်တွေနဲ. ဗျာ။ အားလျော့မယ်လို.တော့မထင်လိုက်ပါနဲ. ဆက်ပြီး ကြိုးစားရင်း နောက်ထပ် နိုင်ငံခြား company တစ်ခုမှာ အလုပ်ရပြန်တယ် ပထမ company ကိုစာချုပ်ပါအတိုင်း လျော်ကြေးပေးပြီးထွက်ခဲ့တယ်ဆိုပါစို. ဗျာ။
အခုဆိုရင်ကျနော့လက်ရှိ company ရဲ့ အစီအစဉ်နဲ. ပုံစံမတူတဲ့ကောင်းကင်ပေါင်းများစွာ ကိုသွားလာနေရပြီ။ ကျနော့နောက်ကလူငယ်တွေကော ကောင်းကင်ကို တသမတ်ထဲမထားပဲ ပြောင်းလဲနိုင်မယ်ဆိုခဲ့ရင်……....
Posted by ရွာသားလေး at 10:58 PM4comments Links to this post
နဲနဲတူရင် Similar တဲ့
အဲဒီ Symbol မရှိပြန်ဘူး
ကျက်မှတ်ထားတဲ့ Theroy တွေနဲ.
Posted by ရွာသားလေး at 9:04 AM2comments Links to this post